12/03/12 ~ Myanmar Forward
အမျိုးသား သစ္စာဖောက်များနှင့် စည်းကမ်းပျက် သစ္စာဖောက် လောက်ကောင်များ
Posted by drmyochit Monday, December 03, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မြန်မာရာဇ၀င်တွင် တိုင်းတစ်ပါးသားနှင့် ပေါင်းကာ ပုန်ကန်တော်လှန်သည့် တောင်ငူဘုရင် နတ်သျှင်နောင် သည် ရာဇ၀င် ထဲက သစ္စာဖောက် ဖြစ်သည်။ ထိုမှ တစ်ဖန် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းနှင့် ခေါင်းဆောင်ကြီး များကို လုပ်ကြံ ခဲ့သည် ဦးစောမှာကား သမိုင်းထဲက သစ္စာဖောက်ဖြစ်သည်။ ထိုမှ တစ်ဖန် ယနေ့ခေတ် တွင်တော့ ဘင်္ဂလီအားပေး သစ္စာဖောက်များကို ဤသို့ အပြစ်ပေးကြလေသည်။
လက်ပန်းတောင်းတောင်အရေး ဆန္ဒပြသူနှစ်ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
လက်ပန်းတောင်း တောင်အရေးမှာ အစိုးရတာဝန် ရှိသူတွေက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့တာ ကိုမကျေနပ်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေ ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ စုပေါင်း ဆန္ဒပြခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုတိုင်းမှူး ဒုရဲမှူးကြီး ဦးသက်လွင်ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးကို ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ ရသူတွေဟာ Generation Wave အဖွဲ့က ကိုမိုးသွေးနဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်က ကိုအောင်စိုးတို့ နှစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုဒ်မှာရှိတဲ့ ကြေးသွန်း ဘုရားကြီးကနေ တာမွေအဝိုင်း ထိပ်ကို ချီတက် ဆန္ဒပြနေချိန် ရွှေဂုံတိုင်ဟိုတယ်အနီးမှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အကြမ်းဖက် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ ဝေမှူးသွင်က RFA ကို အခုလိုပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့က ကြေးသွန်းဘုရားရှေ့ကနေ တာမွေအဝိုင်း ကိုသွားတဲ့အခါမှာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်က ကိုအောင်စိုးနဲ့ Generation Wave အဖွဲ့က ကိုမိုးသွေးရယ်ကို SSC ဆေးရုံနားမှာ ဖမ်းဆီးသွားတာ ကျွန်တော်တို့က မည်သည့် အကြမ်းဖက်မှုကိုမှ မပြုလုပ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေခံရ ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုအသုံးချတာဖြစ်ပါတယ်"
ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ သပိတ်စခန်းတွေက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရသူတွေကို နိုင်တော်အစိုးရက ဝန်ချတောင်းပန်ရေး၊ လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားရေး စတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ကိုင်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အင်အား ၆၀ ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ဒီကနေ့ဟာ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းက သပိတ်စခန်းတွေကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲပြီးနောက် တတိယမြောက်နေ့ အဖြစ် ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Generation Wave မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမိုးသွေးနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားဟောင်းများ အဖွဲ့ကတစ်ဦးကို ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ကိုမိုးသွေးတို့စီးလာတဲ့ အငှားယာဉ် တက္ကဆီကို လမ်းပိတ်တားပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။
စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့ဝင် ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီးတို့အား အယုံအကြည်မရှိသဖြင့် လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဆန္ဒပြမှုများ နိုင်ငံအဝှမ်း ဖြစ်ပေါ်နေ
စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အဖွဲ့ဝင် ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီးတို့အား အယုံအကြည်မရှိသဖြင့် လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဆန္ဒပြမှုများ နိုင်ငံအဝှမ်း ဖြစ်ပေါ်နေ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဆန္ဒပြသူများသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ တန်းစီဆန္ဒပြခွင့် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကာ ကြိုတင်မလျှောက်ထားပဲ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်သည်။
ကားအရေအတွက် များလာသဖြင့် လမ်းတွင် ကားကြပ်ရသည့်အထဲ လမ်းပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် ဆန္ဒပြသူများကို လူထုက စိတ်ပျက်လျှက်ရှိပြီး ယခု ဆန္ဒပြမှုသည် လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ နှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သောက်ပေါ ဖြစ်အောင် လုပ်သလို ဖြစ်နေကြောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။
ထန်းတပင် တူးချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှ NLD ပါတီဝင် ၁၂၀ နှုတ်ထွက်
အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ ကုန်ကြပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တူးချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှ NLD ပါတီဝင် ၁၂၀ နှုတ်ထွက်ကြောင်းသိရသည်။ တူးချောင်းကျေးရွာ၊ ကလီကျေးရွာ၊ ကျောက်ကြီးကျေးရွာ တို့မှ ရပ်ကျေးပါတီတွင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်နေရာ မရရှိခြင်းကြောင့် ပါတီဆိုင်း ဘုတ်များဖြုတ်ကာ စုပေါင်းနှုတ် ထွက်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပါတီဝင် ဟောင်းများက ဦးဆောင်ခဲ့ကြ ကြောင်းသိရသည်။
Glory သင်တန်းကျောင်းတွင် (UK) အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်းများနှင့် အဆင့်မြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း အတတ် ပညာ ရပ်များ သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိရာ အဆိုပါပညာရပ် များကို စိတ်ပါ ဝင်စား သော်လည်း ငွေကြေးအခက် အခဲ ရှိသော လူငယ်များအ တွက် ကူညီ ထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်ကာ Glory မှ နှစ်စဉ်ပညာသင်ဆု Scholarship များ ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သော (၆)နှစ် တာကာ လအတွင်း ၎င်းပညာသင်ဆုကို လူငယ် ၁၁၂ ဦးကို ရွေးချယ် စိစစ်ပေးအပ် ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၃ ပညာသင်နှစ် အတွက်လည်း ပညာသင် ဆုများ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ် သည်။
ယခင် ပညာသင်ဆု ပေးအပ်လေ့ရှိသော City & Guilds (UK) ၏ Level(3) အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း (၆) မျိုးအပြင် ယခုအကြိမ်တွင် Level(5) အဆင့်ရှိ Advanced Diploma သင်တန်း(၄)မျိုး အတွက်ပါ တိုးချဲ့ပေးအပ်မည်ဖြစ်ရာ စုစုပေါင်း သင်တန်းသား ၂ဝ ဦးကို Scholarship ရွေးချယ်ချီးမြှင့် မည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလမှာ ခြောက်လမှ တစ်နှစ်အထိ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သင်တန်းများတွင် City & Guilds (UK) ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ င်္
Full Scholarship ရရှိသူသည် သင်တန်းကြေးနှင့် စာရွက်စာတမ်း ကြေးများ ကင်းလွတ် ခွင့်ဖြင့် တက်ရောက် ပညာသင်ကြား နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Level(3) သင်တန်းများအတွက် အခြေခံပညာ အထက် တန်း အောင်မြင်ပြီး သူတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ပြီး Level(5) သင်တန်းများအတွက် ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပမှ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာတစ်ခုခု ရထား သူများလျှောက် ထားနိုင်သည်။ လျှောက် ထားသူများကို စာမေးပွဲစနစ်ဖြင့် စိစစ် ရွေးချယ်ကာ အခမဲ့ သင်တန်း တက် ရောက်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ် သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို စိတ်ပါဝင်စား သူများသည် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် နောက် ဆုံးထား၍ အမှတ် (၁၃၈/၁၄ဝ) ဒုတိယထပ် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်။ ကျောက်တံ တားမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဖုန်း-ဝ၁-၇၃၁- ၂၁၇၁၇၊ ဝ၉-၅၁၉၇၈၁၇၊ Website www.glory-education.com(Kyaw Home Mart) နှင့် စာပေလောက(၅) အပေါ်ထပ်သုိ့ လူကိုယ်တိုင်လာ ရောက်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသို့....
Posted by drmyochit Monday, December 03, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
၈၈ မျိုးဆက်ဆိုတာ..မဆလ ခေတ်မှာ ဖိနှိပ်ခံကျောင်း သားတွေရဲ့ ရုန်းထွက်တဲ့ သမိုင်းခြေ ရာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာ အမှန်ပါ.. သူတို့တွေကြောင့် လည်း..မဆလ တစ်ပါတီစနစ် ပျက်သုန်းခဲ့ရတာကို ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ ၈၈ ကျောင်းသား များဆိုတာ ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက် ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာဆုံးခန်းတိုင် မသင်ခဲ့ရဘူး။ ဘ၀ရဲ့အချိန်အများစု ထောင်ထဲမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှု အားနည်းတယ်။ မိမိကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ အစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် တွန်းလှန်တဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ အဲဒီလုပ်ငန်းအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ အမြင်နဲ့ပဲ မြင်တတ်တွေးတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အစိုးရ ခေတ်ကနေ ဒီမိုကရေစီခေတ် ပြောင်းသွားတာကို မသိဘဲနဲ့ ဘယ်နားမှာ ဆူဆူပူပူဖြစ်နေပြီလဲ။ ၈၈ တို့ရောက်နေပြီ။ ဟိုနားမှာ စုရုံးစုရုံးဖြစ်နေပြီ။ ၈၈ တို့ဦးဆောင်ပြီ။ ဒ်ီနားမှာ လှုပ်ရွလှုပ်ရွဖြစ်နေပြီ။ ၈၈တို့ ဆွနေပြီ။ အမှန်တော့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ သတ္တိနဲ့ စွန့်လွှတ်မှုတွေက တိုင်းပြည်အတွက် အားဖြစ်နိုင်ရင် အရမ်းတန်ဘိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာနဲ့ အတွေ့အကြုံနည်းပါးပြီး မိမိလုပ်ရပ်အပေါ် အရမ်းအထင်ကြီး လွန်းရင် ဖျက်မြင်းဖြစ်သွားမှာက်ို သတိပြုပါ။ လောကမှာ အပြုလုပ်ငန်းက ခက်ခဲပြီး အဖျက်လုပ်ငန်းက လွယ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခု၊ ကြီးမားတဲ့ တံတားကြီး တစ်စင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အချိန်တွေ၊ အင်အားတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အများကြီး ပေးဆပ်ပြီးမှ ရနိုင်ပေမဲ့ ဖျက်ချင်ရင် ယမ်းထုပ် ပေါင်ဂဏန်းလောက် နဲ့ဖျက်လိုက်လို့ရပါတယ်။
ဒါကို မင်းတို့ဒီလောက် လုပ်ထားတာ ငါတစ်ချက်ပဲ ဖျက်နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်တန်းကျတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အဆင့်နိမ့်ပါးတဲ့ လူရိုင်းအသိဥာဏ် ရှိတဲ့လူလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ နောက်ပြီး တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ မူလရှေးရိုးလက် ဟောင်းတွေထဲက အချို့ကို တွန်းလှန်ရမယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အနော်ရထာမင်း လက်ထက်မှာ အရည်းကြီး သာသနာကို တွန်းလှန်ဖြိုခွဲခဲ့လို့ ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဘုရားကို မြင်တွေ့နေရတာပါ။ အဲဒီခေတ်က သေတဲ့လူမှန်သမျှ နတ်ဖြစ်ကုန်ပြီး နတ်တွေများလွန်းလို့ နတ်လှောင် ကျောင်းထဲမှာ သံကြိုးတုတ်ပြီးချုပ်နှောင်ခဲ့လို့ အခု အတွင်း ၃၇ မင်းနဲ့ အပြင် ၃၇ မင်းလောက်ပဲကျန်ခဲ့တာပါ။ ဒါတွေဟာတော်လှန်လို့ အတွေးသစ်အမြင်သစ်နဲ့ ဆန့်ကျင်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်လာတာပါ။
အခု မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုရ တဲ့အထိ လျင်မြန်သော နှုန်းထားနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတွေကို ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မဲပြာပုဆိုးဇာတ်လမ်းနဲ့ အစိုးရရဲ့အားနည်းချက်တွေပဲထောက်ပြပြီး ခေါင်းဆောင် နေရာနေချင်ရင်တော့ ၈၈ မျုိုးဆက်တွေရဲ့ မူလရည်မှန်းချက် ခံယူချက်တွေနဲ့ သွေဖီကုန်မှာပါ။ တိုးတက်ဖို့ဆ်ိုတဲ့နေရာမှာ တဲကုတ်မှာပဲနေ၊ ထင်းနဲ့မီးမွှေး၊ သစ်ခေါက်တွေနဲ့ ချည်ထည်လုပ်ပြီး ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကို ထိုင်ကြည့်နေမလား၊ ခုတ်သင့်တာခုတ်၊ တူးသင့်တာတူးပြီး ဘ၀တန်ဖိုးမြှင့်တင်မလား။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုပါမယ်။ဒီမှာပြောစရာရှိပါတယ်။
ဒီလိုအတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ကိုဒီအတိုင်းခံ နေရမှာလား ဆိုပြီး ပြည်သူအကျိုး ကြည့်သလိုလိုနဲ့ အမှတ်ဝင်ယူတဲ့ မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ သားသမီးတွေကို တိုးတက်စေချင်ရင် နေရာတကာ အလိုလိုက်လို့မရပါဘူး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရိုက်နှက်ဆုံးမရမှာပါပဲ။ ဒါဟာ ကောင်းစေချင်လို့ပါ။ ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ ၈၈ တွေရဲ့အားဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့အားပါဘဲ။ ဒီအားကိုဆန့်ကျင်ဖက်မှာပဲ အသုံးချနေမှာလား၊ အသုံးချတတ်သလား။ ပြောချင်တဲ့အဓိက အကြောင်း ရင်းကတော့ လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်းပြသနာမှာ ဦးဆောင်တယ်။ ကော်မရှင်ဖွဲ့ ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။ ဒါအစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်တဲ့ အဖျက်သဘောပေါ့။ ကဲ ..အခု နိုင်ငံတော်က ၈၈ တွေကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ ထဲမှာတာဝန်ပေးတယ်။ ဒီအရာက ပြည်သူတွေအတွက်ပဲလေ။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရရင် ပြည်သူတွေအတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကောင်းရင်ကောင်း တယ်၊ ဆိုးရင်ဆိုးတယ်ပြောလို့ရတာပေါ့။ ဒါက အပြုသဘောပေါ့။ ၈၈ မျိုးဆက်များ နဖူးပေါ် လက်တင်ပြီးစဉ်းစားပါ။ မြန်မာပြည်ဟာ တစ်ပါတီစနစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ် တဲ့စစ်အစိုးရ မဟုတ်တော့ဘူး။ သမ္မတလက်မှတ်မထိုးလဲ ဥပဒေက အတည်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ခေတ်ကိုရောက်နေပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ ဂဏန်းလိုကန့်လန့် ပဲသွားချင်ရတာလဲ။ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ၊ ကျွမ်းကျင်မှုအရ ဘေးတိုက်ပဲသွားနေ တတ်ရင်တောင်မှ အခုလိုအခြေအနေမှာ မိမိကိုယ်ကို ဘေးစောင်းနေပြီး သူများနဲ့ဘာလို့ မလိုက်ချင်ရတာလဲ။ ဒီလိုကန့်လန့်တွေက တိုင်းပြည်အတွက် ဆူးညှောင့်ခလုတ်၊ တိုးတက်မှုအတွက် အနှောင့်အယှက်ဆိုတာ သိရဲ့လား၊ မြန်မာပြည်မှာ လူပေါင်း သန်း၆၀ ရှိတယ်။ သန်း ၅၀ တိုးတက်ဖို့ ၁၀သန်းရဲ့ကန့်ကွက်မှုကို တားဆီးမှုကို ရှင်းလင်းကျော်ဖြတ် မသင့်ဘူးလား။ ဒီလို အကျိုးရှိမရှိ ကော်မရှင်ထဲဝင်ပါပြီး အညင်သာ ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ မဖြေရှင်းသင့်ဘူးလား။ မြန်မာပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီ အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး။ ဆန္ဒပြလို့ရမှန်း သိလာတော့ အလကားနေရင်း ဆန္ဒြပချင်တယ်။ လူနည်းနည်းများလာရင် ထင်ပေါ်ချင်လာတယ်။ ဒါတွေဟာ နောင်ကျရင် ရှက်စရာဆိုတာ အလိုလိုသိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောမှာ ဆရာကြီးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကို ဖျောက်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက် ဖို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပါ၊ မသိနားမလည်လို့ ထကြွနေတာကို ထပ်ဖွမနေပါနဲ့။
အမှန်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ ကျေလည်လာအောင်၊ ယုံကြည်လာအောင် အခြေအနေမှန် ကိုလေ့လာပြီး ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ လေ့လာလို့မှ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူ တွေအတွက် အကျိုးအမြတ်မရှိရင်လဲ ပြတ်ပြတ်သား သားဖော်ထုတ်ပြီး ဆန့်ကျင်ကြရမှာပေါ့။ ခုတော့ ကော်မရှင်ဖွဲ့ပေးပါ တောင်းဆိုပြီး ကော်မရှင်ထဲထဲ့တော့ မ၀င်နိုင်ဘူးလုပ်တယ်။ ဖွတဲ့၊ ဆွတဲ့ ခေတ်ကုန်နေပြီ။ စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာပြီးမှ တိတိကျကျ ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့ ခေတ်ရောက်နေတာ ၈၈ ကျောင်းသားများ သတိထားကြပါ။ အနေမမှန်ရင် ၈၈ ဆိုတာ သမိုင်းမှာနာမည်ပျက် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အထူးသဖြင့် နောက်တက်မယ့် ခေါင်းဆောင်သစ် အနေနဲ့ တိုင်းပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက်လာစေဖို့နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြည်ပရောက် တရုတ်မျက်မမြင် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ချန်ဂွမ်ချမ်း (Chen Guangchen) ကတိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ကမ္ဘာတ၀ှမ်း နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်ပေါက်နေချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံလည်း ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်နေပြီလို့ သူက ပြောလိုက်တာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုအောင်လွင်ဦး တင်ပြထားပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ ပြီးတဲ့နောက် အခုအခါ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ်မျက်မမြင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ချန်ဂွမ်ချမ်းက ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အကြိုအဖြစ် တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုက်တွန်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ရှိနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရှေ့လထဲ သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူတော့မယ့် ရှီကျင်းပင် အနေနဲ့ ဒီအခြေအနေတွေကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေတယ်လို့ နယူးယောက်မြို့မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းထဲမှာ သတိပေးလိုက်တာပါ။ “ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က မသမာသူ တယောက် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကို တရားနဲ့အညီ ဘယ်လို အုပ်ချုပ်မှာလဲ? မစ္စတာ ရှီကျင်းပင်း ခင်ဗျား၊ တိုင်းပြည်က ခင်ဗျားကို စောင့်ကြည့်နေ ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လူထုနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံက တောင်းဆိုတာကို လိုက်နာသည်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ အာဏာကိုပဲ ဆက်ထိန်းထား ထိန်းထား၊ တရုတ်ပြည် အနေနဲ့ကတော့ အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ နေရာမှာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ ဖြစ်မလား၊ အကြမ်းပတမ်း ဖြစ်မလားဆိုတာပါပဲ။”
တချိန်တည်းမှာ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ တိုးမြှင့်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာတွေကို မျက်ကွယ်ပြုနေတယ် ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း တရုတ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ချန်ဂွမ်ချမ်းက ဝေဖန်သွားပါတယ်။ ပြည်ပကို ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက် တူဖြစ်သူကို အာဏာပိုင်တွေက ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် စီရင် ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာလည်း လက်တုံ့ပြန် အရေးယူတဲ့ လုပ်ရပ်တခု အဖြစ်နဲ့ သူက ပြစ်တင် ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီလိုပဲ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အများအပြား ဆက်လက် ဖမ်းဆီးခံနေရတာတွေ အဆုံးသတ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
“အခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း လွတ်မြောက်လာပါပြီ။ လူရှား၊ ဟူးဂျား၊ ၀မ် လီဟောင်၊ ဂျန် တီယန်ယောင်နဲ့ တခြားသူတွေ ဘယ်တော့မှ လွတ်လာကြမှာပါလဲ? ဦးသိန်းစိန်က သူ့ကို အတိုက်အခံ လုပ်သူတွေကို လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂေါင် ဇီရှန်း၊ လူရှောင်ဘို၊ ဂေါင် ကွမ်း၊ ယန် တီယန်ရှုး၊ နီယူလန်း၊ ၀ီဂါခရစ်ယာန် အလီမူဂျန် နဲ့ ကျီချောင်ဝှေး တို့လို ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ လွတ်မြောက်ကြမှာပါလဲ? ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့် လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု ရခဲ့သလို၊ နိုင်ငံတကာကလည်း အသိအမှတ်ပြုတာ ခံရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် တောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စကို မစ္စတာ ရှီကျင်းပင် မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ မလုပ်နိုင်တာထက် မလုပ်တာ ဆိုတာကရှင်းပါတယ်။”
တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ်တိုင် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့နဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိဖို့ လိုတယ်လို့ ချန်ဂွမ်ချမ်းက တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ မျက်မမြင် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ရှေ့နေ ချန်ဂွမ်ချမ်း ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရာက ဧပြီလထဲ ထွက်ပြေးပြီး အမေရိကန် သံရုံးမှာ ခိုလှုံခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကြား စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီး ပြည်ပကို ထွက်ခွာခွင့် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by drmyochit Monday, December 03, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ အခြေခံဥပဒေသစ်တရပ် အသက် သွင်းနိုင်ဖို့ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပတဲ့အခါမှာ ခါတိုင်း ဦးဆောင် ကြီးကြပ်နေတဲ့ အီဂျစ်ရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး တရားသူကြီးတွေ အဖွဲ့က သပိတ်မှောက်မယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့က အစိုးရပိုင်သတင်း မီနာ ရဲ့ ကြေညာချက်အရ အီရန်ထိပ်တန်း တရားသူကြီး အဖွဲ့က ဆန္ဒခံယူပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့ တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလို့ ကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်လက အီဂျစ်သမ္မတ မိုဟာမတ်မော်စီရဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အကြွင်းမဲ့အာဏာ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ချိန်ကစလို့ အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း တရားသူကြီးအများစုက သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံး တရားရုံး တရားသူကြီးတွေ စုရုံးပြီးတော့ သူတို့အဆို စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်းအရ ဖိအားပေးမှု ခံရတဲ့ တရားရေးတာဝန်တွေကို ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်တယ်လို့ ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာ သမ္မတကို ထောက်ခံတဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့ လူအုပ်ကြီး စုရုံးနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ တနင်္ဂနွေနေ့က အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ဗဟို တရားရုံးထဲကို သူတို့ ၀င်ရောက်ဖို့အတွက် စိုးရိမ်တယ်လို့ တရားသူကြီးတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ အခြေခံ ဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့နဲ့ အထက်လွှတ်တော် အပါအ၀င် အစ္စလာမ်ဝါဒီတွေ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ အဖွဲ့နှစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် မူလတုန်းက စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးရဲ့တရားဝင်မှုကို စစ်ဆေးဖို့ လိုတယ်လို့လည်း တရားရုံးချုပ်က ပြောဆိုပါတယ်။ သဘောထား ပျော့ပြောင်းတဲ့ ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ဝင်တွေ ၃၀ လောက်ကတော့ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သူတို့သဘော မတူဘူးလို့ မကြာခင်တုန်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အီဂျစ်သမ္မတ မိုဟာမက် မော်စီက ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အခြေခံဥပဒေသစ်ကို အသက်သွင်းဖို့ အတွက် လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲတရပ် ကျင်းပမယ်လို့ ကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အမျိုးသားနေ့တွင် သူမ၏ဖခင် အမျိုး သားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးရပ်ဇာတိ နတ်မောက်မြို့နှင့် တောင်တွင်းကြီး၊ မြို့သစ်၊ မကွေး၊ ရေနံချောင်းမြို့များသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နတ်မောက်မြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး နေပြည်တော် မှတစ်ဆင့် တောင်ညို၊ ချောင်းနက်၊ တောင်တွင်းကြီးလမ်းမှ အဆိုပါမြို့ များသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါမြို့နယ်များတွင် ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံဟောပြော ပွဲများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''အန်တီ စုက တောင်တွင်းကြီး မြို့သစ်လမ်းကနေ နတ်မောက်ကို သွားမှာပါ။ အဲဒီနေ့ ညနေပိုင်း မကွေးကိုကူးလာပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ပါမယ်။ မကွေးမှာ တစ်ညအိပ်ပြီး နောက်နေ့မှာ ရေနံချောင်း၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့တွေကတစ်ဆင့် ပုဂံညောင်ဦးကို သွားရောက်မှာပါ'' ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားပါသည်။
ယခုခရီးစဉ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက် ပြီးနောက် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ ပထမဆုံးသွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် မကွေး တိုင်းဒေသကြီးသို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ကျန်းမာရေး အခြေ အနေကြောင့် မသွားရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂.၁၂.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီအချိန်တွင် လစဉ်လတိုင်း ပထမပါတ်တနင်္ဂနွေနေ့ သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ လုပ်အားပေး အသင်းသား/သူများ၏ လပါတ်အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေ့ရက်ဖြစ်ပေသည်။ အစောပိုင်းတွင် အလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်၌ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူအား ဧည့်သည် ရောက်နေကြောင်း အစည်းအဝေးခန်းသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးမကြာ ဦးကျော်သူ ထွက်လာခဲ့ရာ ဧည့်သည် ဆိုသူသည် နန်းခင်ဇေယျာဖြစ်နေပြီး ယခင်ပထမအကြိမ် လာရောက် ခဲ့စဉ်နှင့်မတူ၊ မမှတ်မိတော့ လောက်အောင် ပုံစံပြောင်းလဲနေသည့် အတွက်အံ့သြ မှင်သက်မိသည်။
ပထမအကြိမ် လာစဉ်ကနှင့်မတူ မြန်မာဆန်ဆန် ဆံပင်စီးလေးနဲ့ အင်္ကျီအဖြူ ရင်ဖုံးလက်ရှည်၊ လုံချည် အနက်ဖြင့် လွန်စွာမှ ကျက်သရေအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံနေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု မြန်မာဆန်ဆန် ကျက် သရေအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံနေယုံတင်မက သူမ၏လာရင်း ကိစ္စသည်လည်း ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိသော မြင့်မြတ်သောသူတို့သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော နာရေးကူညီမှုတည်း ဟူသောကုသိုလ်ရေး ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် Miss Internation 2012 ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် နန်းခင်ဇေယျာသည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်ကာ လုပ်အားပေး မောင်နှမများနှင့် အတူ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး ရင်ဝယ်ပိုက်ကာ ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားကြသော သက်မဲ့ရုပ်ခန္ဓာအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ထမ်းရွက်ပေး ဆပ်ရန် တက်ကြွသော ခြေလှမ်းများဖြင့် လာရောက် ခဲ့သည့်အတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုခဲ့သည်။ အများအကျိုး လူမှုရေးလုပ်ငန်း များအတွက် မိမိတို့၏ အားလပ်ချိန်များအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးချ၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၌ လုပ်အားပေးနေကြသည့် မောင်နှမများအား နှုတ်ဆက်ကြပြီးနောက် အသင်းသို့ရောက်ရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး၊ ရင်ထိုးတပ်ဆင်၊ လည်ဆွဲကဒ်ထုတ်ယူအပြီး ဈာပနဋ္ဌာနသို့ အကူအညီ တောင်းခံထားသည့် လမ်းကြောင်းများအနက် ကူညီဖေးမရန် အမှတ်စဉ်အလှည့်ကျသည့် ကွယ်လွန်သူ ဦးဇော်မိုးဦး အသက် (၄၄) နှစ်၏ ရုပ်ခန္ဓာအား စံပြဆေးရုံမှ ရေဝေးသုဿန်အအေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ရမည့် ဈာပနလမ်းကြောင်းအား လိုက်ပါကူညီ ဖေးမပေးခဲ့ပြီး နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဈာပနဋ္ဌာနသို့ ပြန်လည်ရောက်လာချိန်တွင် မိမိလိုက်ပါ ပို့ဆောင်ခဲ့သည့် နိဗ္ဗာန်မော်တော်ယာဉ်၏ အလှည့်သို့ တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့် ပြန်လည်ရောက်သည့်အတွက် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် နန်းခင်ဇေယျာသည် အားမာန် အပြည့်ဖြင့် မဆိုင်းမတွ ဒုတိယမြောက် ဈာပနလမ်းကြောင်းအဖြစ် ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ (၁၂) ရပ်ကွက်နေ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်ခင်မြ အသက် (၈၇) နှစ်၏ ရုပ်ခန္ဓာအား နေအိမ်မှ ရေဝေးသုဿန်သို့ ပို့ဆောင် မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်းအား ကူညီဖေးမပေးခဲ့သည်။ မအားလပ်သည့်ကြားမှ အချိန်ပေး၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်၍ လုပ်အားဒါန ပြုသော နန်းခင်ဇေယျအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အထူးကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက် ပါကြောင်းနှင့် “အနိမ့်ကျဆုံးသော ကုသိုလ်အလုပ်မျိုးကို မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားရှိသူတို့သာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်” ဆိုသည့် တောင်စလင်း တိုက်ဆရာတော် ဦးတိက္ခ၏ မွန်မြတ်လှစွာသော ဆုံးမသြဝါဒ စကားရပ်နှင့်အညီ မြန်မာပြည်သူလူထုတို့၏ ချစ်ခင်အားပေးခြင်းခံရသူ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် နန်းခင်ဇေယျာ၏ စိတ်စေတနာ အရင်းခံဖြင့် အများပြည်သူတို့အား ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်၍ ပေးဆပ် နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏ နောက်ဆုံးခရီးအား လိုက်လံပို့ဆောင် ကူညီဖေးမပေးမှုကြောင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့၏ နှလုံးသားဝယ် သောကအပူများ အတတ်နိုင်ဆုံး ငြိမ်းအေးစေမှုသည် ကူညီဖေးမသူတို့ထံ ကူးစက်ကာ ပီတိဟူသော အမည်ဖော်ပြ၍ မရနိုင်သည့် အေးငြိမ်းသော ခံစားမှုကို ပြန်လည်ကူးစက်စေသည်မှာ နာရေးကူညီမှုအ သင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသား/သူများအနေဖြင့် အစဉ်ထာဝရခံစားရမြဲဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သော အေးငြိမ်းမှု ပီတိအား နန်းခင်ဇေယျာ တစ်ယောက်ထံသို့ ကူးစက်သွားစေတော့သည်။ နန်းခင်ဇေယျာသည် ယနေ့ လုပ်အားဒါနပြုခြင်း ပြီးဆုံးသွား၍ နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ ပြန်လည်မထွက်ခွာမီ “သမီးတစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ်လာရောက် လုပ်အားပေးချင်တယ်” ဟူ၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထပ်မံပြောကြားခဲ့မှုသည် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အပြင် နာရေးရှင်များအတွက် သောကအပူများ ငြိမ်းသတ်ပေးနိုင်သော အနုပညာသည် လူမှုသူရဲကောင်းတစ်ဦး ပေါ်ထွန်းလာခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲကို အနောက် နိုင်ငံများတွင် အေးခဲသော ဆောင်းတွင်း ကုန်လွန်ပြီး သာတောင့်သာယာ ကာလအစ နွေဦးနှင့် တင်စားပြီး မြန်မာ့နွေဦးဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ထိုနာမည် စီးသောကြောင့်ပေလား မသိ၊ နွေဦးကာလ လေပွေ အမွှေ့ တွင် ဖုန်လုံးတို့ ထောင်းခနဲ ထောင်းခနဲ ထသည့် အတိုင်း ယနေ့ မြန်မာနုိုင်ငံသည် ဖုန်ထသော ကာလ၊ ရှုပ်ထွေးသော ကာလကို ဖြတ်သန်း နေရသည်။
ထိန်းချုပ်ထားသော အားများကို ဖြည့်လွှတ် လိုက်သည့် ကာလ ဖြစ်သည့် အတိုင်း သိပံ္ပသဘော အရ မျှခြေ အသစ် (New Equilibrium) တစ်ခုကို သွားနေသေးရာ ထိုမျှခြေသစ်သို့ မရောက်မချင်း မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေဦးမည်။
စပ်ကူးမပ်ကူး ကာလနှင့် လျော်ညီစွာ အရာရာ အားလုံးသည် ရောယောင် ရှုပ်ထွေးနေသည်။ အားလုံး အသွင်ကူးပြောင်း နေကြသော ကာလ ဖြစ်သည့်အတိုင်း သူ့အခန်းကဏ္ဍ၊ ကိုယ့်အခန်းကဏ္ဍ မပီပြင် သေးသလို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အစပ်အဟပ် မတည့် သေး။ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးသည် တစ်နှစ်ခွဲ၊ ၂ နှစ်သားသာ ရှိသေးရာ အားလုံး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရှောရှောရှူရှူ တည့်မတ် ဖြောင့်တန်းသွား ရန် စောလွန်း သေးသည်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလကို ဦးဆောင် နေသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်တိုင် အသွင်ကူးပြောင်း နေကြရသည်။ ယခင် အကျဉ်းစံ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ယခုအချိန်တွင် ရပ်ရေးရွာရေး ပြည်ရေးတွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ယခင်က လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်ခဲ့သူ အချို့ အစိုးရနှင့် အနီးကပ် လက်တွဲကာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင် နေကြသည်။ ပြည်ပတွင် ဆယ်စုနှစ် နှစ်စု ကြာ အနေကြာခဲ့သူတို့ ပြည်တွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်း အခြေစိုက်ရန် ပြင် ဆင်လာကြပြီ။ အစဉ်အလာအရ တန်ခိုးထွားခဲ့သည့် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်သည် အခြားသော မဏ္ဍိုင်များဖြစ်သည့် ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်တို့နှင့် အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံး နေရပြီး ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင် ရေးတို့သည်လည်း အပြောင်းအလဲ အတိုင်း လိုက်ပါနိုင်အောင် ပြောင်းလဲ နေရသည်။ တပ်မတော်သည် အုပ်ချုပ်ရေးတွင် တိုက်ရိုက် ဝင်ပါခဲ့ရာမှ ယခုအချိန်တွင် ထိန်းညှိရေးနှင့် တပ်မတော် သက်သက်ကဏ္ဍသို့ ကူး ပြောင်းနေပြီ။ အတိုက်အခံသာ လုပ်ခဲ့ရသည့် အတိုက်အခံ နုိုင်ငံရေးမှ သည် ဆုံးဖြတ်ချက် ယန္တရားတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ရသည့် ပုံမှန်နိုင်ငံရေးဘက်သို့ ဦးလှည့် လာသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုခန့် ကို အိမ်တွင်းတွင်သာ ကုန်လွန်ခဲ့၊ ပြင်ပနှင့် အထိအတွေ့ နည်းခဲ့ရရာမှ အိမ်ပြင်တွင် အနေများသော၊ လူအများနှင့် ထိတွေ့မှုများသည့် ဘဝသို့ ချက်ချင်းလက်ငင်း ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး လက်တွေ့နိုင်ငံရေး၊ ဆုံးဖြတ် ချက်ယန္တရားထဲသို့ ရောက်ရှိနေပြီ။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် မီဒီယာတို့သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ နှုတ်ဆိတ်ခဲ့ရာမှ အသံထွက်လာခဲ့ကာ အစဉ်အလာ အာဏာကြီး အဖွဲ့အစည်း တို့က သတိထား အသိအမှတ်ပြုခံလာရ သည်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့် ပြည်သူတို့ ခံစားလာရသည်။
စပ်ကူးမပ်ကူး ကာလ အစိုးရသည် စပ်ကူးမပ်ကူးကာလ အစိုးရ တို့ ကြုံတွေ့ရမြဲ အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေရသည်။ ပွင့်လင်း စွာ ဝေဖန်နိုင်သည့်၊ တောင်းဆိုနိုင်သည့် ကာလတွင် ကိုလိုနီအစိုးရ အပါအဝင် အစိုးရ အစဉ်အဆက်တို့၏ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေကို ခံကာ ပြဿနာသစ်၊ ပြဿနာဟောင်း တစ်သောင်းခြောက်ထောင်ကို မနိုင့် တနိုင် ဖြေရှင်းနေရသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလကို အစိုးရပိုင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်း ကဏ္ဍစုံတို့သည် ချိုကျိုးနားရွက်ပဲ့၊ ချုံးချုံးကျ ပညာရေး က မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် လူသား အရင်းအမြစ် ပါချီပါချက်တို့ အင်အား နှင့် မနိုင့်တနိုင် စမ်းတဝါးဝါး ဖြတ်သန်းနေရသည်။
တစ်ခုချင်းစီ ဖော်ဆောင်ရသည်ပင် ခက်ခဲနက်နဲလှသည့် စီးပွား ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို နှစ်ခုလုံး တစ်ပြိုင်နက် မောင်းနှင် ပြောင်းလဲနေသည်မှာ ကာယကံရှင်တို့မူ နီးလွန်းသဖြင့် မြင်ချင်မှ မြင်ကြမည် ဖြစ်သော်လည်း အဝေးမှ လေ့လာ သူတို့ပင် ‘လှံဖျား ပုစဉ်းနား၊ ကျီးကန်းက ချေးပါ’ ဖြစ်နေကြရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသာ အောင်မြင်သွားလျှင် အခြားနိုင်ငံများ အတွက် လိုက်နာ အတုယူစရာ မော်ဒယ်လ် ဖြစ်လာနုိုင်သည့် ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ဂုရုများစွာတို့ စိတ်ဝင်တစား စောင့် ကြည့်နေကြသည်။
လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခွင့် ရလာခြင်းကြောင့် ဆန္ဒထုတ် ဖော်ပွဲများသည် မိုးဦးကျ မှိုများ ပွင့်သကဲ့သို့ အစီအရီ ပေါ်ထွက်လာကြ သည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အရေး၊ လျှပ်စစ်မီး အရေး၊ အလုပ်သမား အရေး၊ ကျောင်းသား အရေး၊ အမျိုးသမီး အရေး စသည်ဖြင့် အရေးသစ် အရေးဟောင်း အရေးတကာတို့ စုံလင်သည်။ မျှော်လင့်ချက်တို့သည် ခြေ တစ်လှမ်းချင်း တစ်လှမ်းချင်း မယုံမရဲဖြင့် နင်းခဲ့ရာမှ ရဲရဲတင်းတင်း ခြေလှမ်း လှမ်းလာကြသည်။ မျှော်လင့်ချက်တို့ ထိုးအတက်နှင့် လွတ်လပ် စွာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခွင့်တို့ တိုက်ဆိုင်သော ကာလဖြစ်သည့်အတိုင်း မျှော်လင့်ချက် တောင်းဆိုချက် တို့ကို ဖြည့်ဆည်း မပေးနိုင်လျှင် ခံစားချက်တို့ ပွင့်ထွက် လျှံကျနိုင်သော ကာလဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းမှ နုိုင်ငံရေးကို တစ်ထစ်ပြီး တစ်ထစ် ပြောင်းလဲ လာသည့် တရုတ်နှင့် ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့ နိုင်ငံများ တွင်ပင် နိုင်ငံသားတို့၏ မြင့်မားလာသော မျှော်လင့်ချက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် ခေါင်းခဲနေကြရရာ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ပြိုင်တူ ပြောင်းလဲ နေသည့် နိုင်ငံမျိုး၊ နာလန်ထစ နိုင်ငံမျိုးတွင် မည်မျှ ခက်ခဲမည်ကို မြင် သာနိုင်သည်။ တရုတ်နဂါးနှင့် အိန္ဒိယကျားတို့ ခြေကုပ် ယူထားသည့် နေရာ ဒေသအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို မြင်ခဲ့ကြရာမှ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ တစ်ဖက် ကမ်းမှ လင်းယုန် ထိပ်ပြောင်ကြီး ပျံဝဲလာပြီး မြေပြင်သို့ပင် ခြေချသွားခဲ့ သောအခါ မဟာအင်အားကြီးတို့ သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကြဲရာ ကွင်းသစ်အဖြစ် အရှေ့ အနောက်မီဒီယာ၊ လေ့လာဆန်းစစ်သူတို့က သူ့ထက်ငါ သတ်မှတ်လာကြသည်။ ပျိုတိုင်းကြိုက်သည့် နှင်းဆီခိုင် ဖြစ်လာသော ကြောင့် မိမိနှစ်သက်ရာ ခေါင်းခေါက် ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် ရလာသော် လည်း နိုင်ငံကြီးတို့ ကစားကွက်ပြိုင်ရာ မြေတလင်း ဖြစ်မသွားရန်လို သည်။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အကျိုးစီးပွားတို့ ထိပ်တိုက် တွေ့ရာတွင် မလိုလားအပ်သော အဆိုးတရားတို့ စီးဝင်မလာစေရေး ကိုင်ရန်တွယ် ရန်၊ ထိန်းချုပ် စီမံတတ်ရန် အရေးကြီးသည်။
မြန်မာ့ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုသည် ဟိုတိုးသည်တိုက်နှင့် အရှိန်မြန် လွန်းသောကြောင့် ရင်လည်းမောရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသွားနေသော အရှိန်နှင့် နိုင်ငံတွင်း ကိုယ်ခံစွမ်းရည် အားနည်းမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်သုံး သပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှိန်တင်ကိရိယာ လီဗာသာပါပြီး ဘရိတ်မပါသည့် ကားများ ဖြစ်နေရော့သလားဟု အချိုးအကွေ့တို့တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အရှိန်လျှော့နိုင်စွမ်းရှိမရှိ ပညာရှင်အချို့က စိုးရိမ်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခက်အခဲတို့မှာ ကြီးမားသလို အမျိုးစုံလင်လှ သောကြောင့် ရှေ့မှ ရင်ကို မြေကတုတ်လုပ်ကာ ရင်ဆိုင်ကြမည့် ခေါင်းဆောင် တို့ ကိုယ်ခံအားကောင်းရန်၊ ရှေ့သို့ကြိုမြင်ရန်လိုသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံ ရေးတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပကစားသမား များလာပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာ့အကျိုး စီးပွားထက် နီးစပ်ရာအကျိုးစီးပွား၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတို့ကို ဦးထိပ် ထားကစားသူများလည်း ပါလာနိုင်သောကြောင့် မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင် တို့ တစ်ကွက်မက သုံးလေးကွက် ရှေ့က ကြိုမြင်မှရလိမ့်မည်။ စပ်ကူး မပ်ကူးကာလ ဆင်းရဲနိုင်ငံကို ဦးဆောင်ရသူများ ဖြစ်သည့်အတိုင်း အခြေကျပြီးသား တိုင်းပြည်များကို ဦးဆောင်ရသူတို့ထက် အဆပေါင်း များစွာ အားကုန်ထုတ်ရလိမ့်မည်။
အကျပ်အတည်းနှင့် ကြုံချိန်သည် ခေါင်းဆောင်တို့၏ တကယ့် မှတ်ကျောက်ဖြစ်သောကြောင့် ခေါင်းဆောင်တို့၏ ထက်မြက်မှုကို မြင်တွေ့ရမည့် ကာလဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ သူဦးဆောင် သော သူများထက် အဝေးကို လှမ်းကြည့်နုိုင်သလို မိမိမြင်လျှင် မြင် သည့်အတိုင်း အဖွဲ့သားများကို ရှင်းပြနိုင်ရမည်။ံမွေှိမကအ့ ခေါ် ကြားရနားဝ မသက်သာသည့် အမှန်တရားကို အများအကျိုးရှိလျှင် ပြောရဲရမည်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့သားများထက် ထက်မြက် သည်ထင်သောကြောင့် ခေါင်းဆောင်နေရာ ရောက်နေခြင်းဖြစ်ရာ နောက်မှလိုက်နေလျှင်မဖြစ်၊ ရှေ့မှ ခေါင်းဆောင်ရန်လိုသည်။ နိုင်ငံကို တည်ဆောက်နေသည့် တစ်ချိန်တည်းတွင် အဆိုပါ ခေါင်းဆောင် တို့သည် ခေါင်းရှိပြီး ကိုယ်မရှိသည့်၊ ခေါင်းဆောင်ပျောက်သည်နှင့် နောက်ကောက်ကျလေ့ရှိသည့် မြန်မာအဖွဲ့အစည်း (Myanmar Institutions) တို့၏ ကောက်ရိုးမီး အစဉ်အလာကို တော်လှန်ကာ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ တာဝန်ယူနိုင်သည့်၊ တစ်ဗိုလ်ကျ တစ်ဗိုလ် တက်နိုင် သည့် အဖွဲ့အစည်းတို့ကို စနစ်တကျတည်ဆောက်ရဦးမည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတို့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကို အခြားနိုင်ငံ တို့က စုတ်တသပ်သပ် နှုတ်ဖြင့် သနားခဲ့ကြရာမှ အချို့က မနာလို မရှုစိမ့်ဖြစ်ကြ ရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ သနားခြင်းမှာ မိမိထက် နိမ့်ကျ သူဟု ထင်သောသူကို၊ မနာလိုခြင်းမှာ မိမိထက် သာလွန်သောသူကို ဖြစ်သောကြောင့် အနည်းဆုံး အခြားသူတို့ အမြင်တွင် မြန်မာ့အနေ အထား မြင့်တက်လာခဲ့ပြီ။
သမိုင်းတစ်လျှောက် မကြုံဖူးသေးသော အခွင့်အလမ်းကို မြန်မာ နိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေသည်။ ‘ကံသည် အလုပ်’ ဖြစ်သည်။ အစိုးရနှင့် သြဇာကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသူ နုိုင်ငံသားများ၏ စုပေါင်းလုပ်ရပ်များ၊ စုပေါင်း အတွေးအကြံများသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးကာလမှ ထွက်ပေါ်လာသော အဆိုးအကောင်းများ တစ်နည်း အားလုံး၏ စုပေါင်းကံကို ဖော်ဆောင်လိမ့်မည်။
အာရာဖတ် ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်တူးဖော်စစ်ဆေး
ရာမာလာ - ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင် ယာဆာအာရာဖတ်၏ ရုပ်အလောင်းကို နိုဝင်ဘာလ
၂၇ ရက်နေ့က ပြန်လည် ဖော်ယူခဲ့ပြီး အဆိပ်မိခဲ့ခြင်းရှိ မရှိ စမ်းသပ်ရန် ကျွမ်းကျင်သူများက နမူနာ များစတင်ရယူနေပြီဟု ပါလက်စတိုင်း သတင်း ရင်းမြစ် များက အေအက်ဖ်ပီသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမည်မဖော်လိုသည့် သတင်းရင်း မြစ်များက ပြောကြားရာတွင် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၅ နာရီကစတင်ပြီး ပြင်သစ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် ရုရှားကျွမ်းကျင် သူများရှေ့မှောက်၌ ရုပ်အလောင်း မှနမူနာ များကို ရယူခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
နမူနာရယူသည့်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက် နေဆဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကို တရားဝင် အတည်ပြုထား ခြင်းမရှိဘဲ ရုပ်အလောင်း ပြန်ဖော်သည့် မြင်ကွင်းကိုလည်း အများ ပြည်သူများကို ကြည့်ရှုခွင့် မပေးခဲ့ပေ။ အာရာဖတ်နေထိုင်ခဲ့ရာ မူကာတာ ခြံဝင်းအတွင်း၌ရှိသော အာရာဖတ် အုတ်ဂူရှိရာ ဗိမာန်ကို ရက်သတ္တပတ် များကြာအောင် အပြာရောင်တာပေါ် လင်စများနှင့်ပိတ်ကာထားပြီး သတင်းမီဒီယာ သမား များကိုလည်း အနားသို့ လာရောက်ခွင့်မပြုပေ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်က ပြင်သစ်ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှုခံယူရင်း သေဆုံးခဲ့ပြီး ရှစ်နှစ်အကြာတွင်
အာရာဖတ်မှာ အဆိပ်မိ၍ သေဆုံးခြင်းဟုတ်မဟုတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အသစ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ပိုလိုနီယမ် (Polonium) ရေဒီယို သတ္တိကြွပစ္စည်းတစ်မျိုးကို ရှာဖွေရန် အာရာဖတ်၏ ရုပ်အလောင်းမှ နမူနာ ရယူခြင်းဖြစ်သည်။
အာရာဖတ်၏ဇနီး ဆူဟာက အာရာဖတ်၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဆွစ်ဇာလန်
ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုသို့ပို့ပြီး စစ်ဆေးခိုင်းသည်ကို အယ်လ်ဂျာဇီး ယားသတင်း ဌာနကထုတ်လွှင့် ခဲ့ပြီးနောက် ထိုသို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
အဆိပ်ဖြစ်စေသော ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ပိုလိုနီယမ်ကို အာရာဖတ်၏ အသုံးအဆောင်များတွင် တွေ့ရှိသည်ဟု ဆွစ်ဇာလန်ဓာတ်ခွဲခန်းက ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ထပ်မံပြီး စစ်ဆေး ရန်အတွက် အာရဖတ်၏ ရုပ်လောင်းကို ပြန်လည်တူးဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို တာဝန်ယူဆောင် ရွက်နေသည့် ပြင်သစ် တရားသူကြီးများ က ရုပ်
အလောင်းတူးဖော်မှုကို ကြည့်ရှုရန် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်က ရာမာလာမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြ
လက်ပံတောင်းကော်မရှင်မှာ ၈၈ တွေ မပါဝင်လို
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ထဲမှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ မပါဝင်လိုကြောင်း ထုတ်ဖော် ကြေငြာ လိုက်ပါတယ်။
ဆက်စပ်သတင်းနဲ့ အစီအစဉ်များလက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကိစ္စ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့လက်ပံတောင်း ထိခိုက် သံဃာတွေ အကူအညီလိုလက်ပံတောင်းဖြိုခွင်းမှု ရဲမှူးကြီး ခုခံပြောကြားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌအဖြစ် ပါဝင်ပြီး အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၃၀ ပါရှိတဲ့ ကော်မရှင်ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က စနေနေ့တုန်းက ဖွဲ့စည်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ထဲမှာ ပါတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အစိုးရအရာရှိကြီးတွေ၊ တက္ကသိုလ် ပညာရှင်တွေ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ ဦးကိုကိုကြီး၊ သပိတ်မှောက်တဲ့ ရွာ ၂၆ ရွာထဲမှာ ရွာ ၃ ရွာက ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးတို့လည်း ပါဝင်ကြပါတယ်။
၈၈ အဖွဲ့အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အခု ဖွဲ့လိုက်တဲ့ ကော်မရှင်မှာတော့ ပါဝင်လိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိကြောင်း သူတို့ရဲ့ ကြေငြာချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
NLD ပုလဲမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ကလည်း အခုလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖွဲ့တဲ့ ကော်မရှင်ကို လက်မခံတဲ့အကြောင်း ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ အခုလို လက်မခံမှု တချို့ ရှိနေတာကြောင့် လူတွေ ပိုမို ယုံကြည် လက်ခံ နိုင်မှု ရဖို့ဆိုရင် အခု ကော်မရှင်မှာပါတဲ့ ရွာသား ၃ ဦးအပြင် သပိတ်မှောက် ကျေးရွာတွေကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပြောနိုင်မယ့် နောက်ထပ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အများလေးစားတဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ တတ်သိပညာရှင်တွေ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အာရှ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ရှေ့နေ ဦးမင်းလွင်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီစုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတချို့ကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ ပြောသလို လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ဝက်မှေးရွာသူ မအေးနက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ကော်မရှင်ကို လက်ခံတဲ့အကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ သပိတ်ကိုတော့ လှန်ဦးမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း ဈေးကွက်တွင် ဈေးကွက်ဝေစု အများဆုံးရယူထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ SCG(The Siam Cement Public Limited ) မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထုတ်ကုန်ဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်း များစတင် လုပ်ဆောင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာဖြစ်သူ Mr.Soontornpol Veerapravati က ပြောပါသည်။
SCG မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံး ထုတ်ကုန်အဖြစ် ဘိလပ်မြေ စက်ရုံအား တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ တည်ဆောက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။ အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း အောင်မြင်သည့် ထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သည့် SCG အနေဖြင့် အဓိကလုပ်ကိုင်နေသည့် ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း ငါးမျိုးရှိနေပြီး အဆိုပါ ထုတ်ကုန်များမှာSCG ဘိလပ်မြေ၊ SCG ဓာတုပစ္စည်း၊ SCG စက္ကူ၊ SCG အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနှင့် SCG ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်း များဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ SCG ရဲ့ အဓိကထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ စတင်လုပ်ဆောင် ပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ SCG ရဲ့ တစ်ဦးတည်းပိုင် အရောင်းဆိုင် လေးဆိုင်ကို ရန်ကုန်၊ မန္ထလေး၊ နေပြည်တော်စတဲ့ မြို့ကြီးသုံးမြို့မှာ လက်ရှိလည်ပတ်နေပြီး အခြားမြို့ကြီးတွေမှာ တိုးချဲ့ဖို့လည်း လုပ်ဆောင်နေပါတယ်” ဟု Mr.Soontornpol Veerapravati က ပြောပါသည်။
SCG မှ မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်အတွင်း ၀င်ရောက်သည့်ကာလ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိကာလတွင်မှ ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရန် စတင်တည်ဆောက် မည်ဖြစ်သော်လည်း အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ စသည့်နိုင်ငံများ၏ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
SCG အနေဖြင့် ယင်းတို့၏ ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့် SCG ဆင်တံဆိပ် ဘိလပ်မြေ အား မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများသို့ နှစ်စဉ်တန်ချိန်ပေါင်း ၂၂ သန်း ထုတ်လုပ် တင်ပို့နေကြောင်း လည်း သိရှိရပါသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိလပ်မြေလိုအပ်ချက် များပြားနေပြီး ပြည်တွင်းတွင်လည်း ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ၁၅ ရုံသာ ရှိနေကာ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တည်ဆောက် မှုများ ဆက်လက်ခွင့်ပြုပေးရန် စီစဉ်မှုများ ရှိနေကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကန်ဒေါ်လာ ၉၅၆၈.၀၉၃ သန်း မြှုပ်နှံထားသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ပါရဂူဘွဲ့ရပြီးမိမိ မွေးရပ်မြေ ရသေ့တောင်သို့ ပြန်လာသော ဒေါက်တာ အသျှင် ဉာဏုတ္တရအား မြို့သူ မြို့သားများက အခမ်းအနား ပြုလုပ်ကာ ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ဒေါက်တာ အသျှင်ဉာဏုတ္တရသည် သိရီလင်္ကာနိုင်ငံ ကေလဏိယ တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး၊ နိုဝင်္ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က သူ၏ မွေးရပ်မြေ ရသေ့တောင်မြို့ သို့ ပြန်လာရာ ပြည်သူများက ရခိုင် မင်္ဂလာ စည်တော်များ တီးခတ်ပြီး ခမ်းနားစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ အသျှင်ဉာဏုတ္တရသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ပါရဂူဘွဲ (Ph.D.) ရရှိခဲ့ပြီးနောက် မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံများသို ခရီး လှည့်လည် ကြွရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းနောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ သို့နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မှ တဆင့် သူ၏ မွေးရပ်မြေ ဇာတိမြို့ ရသေ့တောင်သို့ ပြန်လာရာ စစ်တွေမြို့ မှ ဓည၀တီ သင်္ဘောဖြင့် ကြွရောက်ခဲ့ကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။ ရာနှင်ံ ချီသော ကြည်ညို သဒ္ဓါ စေတနာ တရားရှိသူ မြို့သူ မြို့ သားများက ၀မ်းပန်းတသာ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ လာရောက်ကြိုဆို သူများသည် ဒေါက်တာ အသျှင် ဉာဏုတ္တရ၏ ဂုဏ်သတင်းကြောင့် တွေ့ လို မြင်လိုကြသည့် အတွက် လာရာက်ကြိုဆို သူများလည်း ရှိသကဲ့သို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင် လူမျိုးများ ပီပီ ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ခြင်း၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုဟု ဆိုသော မင်္ဂလာ တရားတော်နှင့်အညီ ကြိုဆို ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု လည်း ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။ ၎င်းပြင် ဒေါက်တာ အသျှင်ဉာဏုတ္တရသည် အသက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ ကို ရရှိခဲ့သည့်အတွက် သူ၏ ကြိုးစား အားထုတ်မှုကို ဒေသခံများက ချီးကျူး ထောပနာ ပြုခဲ့ကြသည်။ ၄င်းပြင် ဒေါက်တာ အသျှင်ကလည်း သူ့ အား ယခုကဲ့သို့ကြိုဆိုဂုဏ်ပြု ကြသည့်အတွက် အထူးပင်ဝမ်းသာမိကြောင်း ဖွင့်ဟမြွက်ကြားသည်။
ဒေါက်တာအသျှင် ဉာဏုတ္တရသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ပါရဂူဘွဲ့ရသည့် ပထမဆုံးသော ရခိုင် ရဟန်းတော် တစ်ပါးလည်း ဖြစ်သောကြောင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့ ၏ ဂုဏ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ဂုဏ်၊ ရသေ့တောင်မြို့ ၏ ဂုဏ်ကို ဆောင်ယူ နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး တစ်ပါးလည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေါက်တာ အသျှင်ဉာဏုတ္တရသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသွားရောက် သင်ကြားတတ်မြောက် ခဲ့သော်လည်း တိုင်းတပါးတွင် မနေဘဲ မိမိမွေးရပ်မြေသို့ပြန်လာကာ သူတတ်ကျွမ်းထားသော ပညာရပ်များဖြင့် ရခိုင် မျိုးဆက်သစ် ရဟန်းတော်များ၊ လူငယ်များ၏ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် သဲတပွင့် အုတ်တချပ်အဖြစ် အကျိုးပြု သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
သို့အတွက် ဒေါက်တာ အသျှင် ဉာဏုတ္တရ၏ စေတနာ အပေါ် မြို့ သူ မြို့ သား၊ နယ်သူ နယ်သား၊ လူငယ်လူရွယ် များအားလုံးက အထူး စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ဒေါက်တာ အသျှင်ဉာဏုတ္တရကို ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့ တောင်ရင်းတန်းရပ်ကွက်၌ အဖ (ဦးသာထွန်းအောင်) နှင့် အမိ ဒေါ်လှစောညိုတို့ ထံမှ ၁၉၈၃-ခု ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက် (အင်္ဂါနေ့ )တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း (၁၂)ဦးအနက် (၉)ဦးမြောက် ဖြစ်သည်။ သာသနာဘောင်သို့၁၃၆၁-ခု တန်ခူးလဆန်း (၃)ရက် ကြာသပတေးနေတွင် ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဒေါက်တာအသျှင် ဉာဏုတ္တရ ထူထောင်ထားသော `ကိန်းသာဓမ္မကျောင်း´ ရသေ့တောင်မြို့ ၊ တောင်ရင်းတန်း ရပ်ကွက်တွင်သီတင်းသုံးလျှက်ရှိသည်။
သာသနာ့ ၀န်ထမ်း လား သာသနာ့ ၀န်ထုပ်လား
သာသနာ့ ၀န်ထမ်း လား..သာသနာ့ဝန် ထုပ်လား..ဘုရား.. ဖြေကြားပေးပါ... ( အရှင်သုစိတ္တသာရ ( မုတ် ကျွန်း ) ဆရာတော် ရေးသားသော .. သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်း ဟူသည် ... ထဲမှ ဖတ်၍ မေးလျှောက် ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်.. )
သာသနာတော် တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ကြသော ရှင်ရဟန်းများ သည် “ သမဏ သာရုပ္ပ ” ခေါ် လေးစား ကြည်ညိုဖွယ်ရာ အသွင်ကို ဆောင်ပါမှ သာသနာတော် အားလည်း ကြည်ညို အလေးထား သူ ပေါများပေ လိမ့်မည်။ သို့သော် ရှင်ရဟန်းအချို့သည် ထိအချက်ကို အလေးမမူဘဲ မြတ်ဘုရား ပညတ် တော်မူခဲ့သော ၀ိနည်းတော် နှင့် မလျော်ညီသော မအပ်စပ်သော အားထုတ်မှုများ ကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ပြုလုပ်လာ ကြ သည်ကို တွေ့မြင်လာ ရပေသည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် “ ကိုယ်မကောင်းတာ လုပ်လျှင် ကိုယ်သာ ခံရသည် ” ဆိုသော် လည်း မိမိ၏ မဆ င်ခြင် မှုသည် “ တစ်ပါး မကောင်းမှုကြောင့် အများ ကိုပါ ထိခိုက် နစ်နာစေ လိမ့်မည် ” ဖြစ်သည်။ ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံး ပုပ် မဖြစ်စေရန် .. မိမိပယောဂ ကြောင့် သံဃာ ထုကြိး တစ်ရပ်လုံး နှင့် သာသနာ တော် ကို ထိခိုက်စေမည့် အပြုအမူမျိုးကို အထူး အလေးထား ရှောင်ရှား သင့်ပေသည်။ စပါးကို ကိုက်တာ စပါးထဲကပိုး ၀ါကိုဖျက်တာ ၀ါထဲက ပိုး ဆိုသကဲ့သို့ သာသနာတော် ကိုဖျက်စီးရာမှာ သာသနာ တွင်းလူ ( ၀ါ ) သာသနာတွင်း ပိုး က ပို၍ ကြောက်စရာ ကောင်းသည် ကို သတိပြုမိ ကြဖို့ လိုပါသည်။
သို့မဟုတ် ပါက သာသနာ့ ၀န်ထမ်း ဟု အမည်ခံထား ပါလျှက် သာသနာ ပြုသူ မဟုတ်ပဲ သာသနာ ဖျက်သူ ဖြစ်ခဲ့လျှင် သာသနာ့ ၀န်ထမ်း မဖြစ်ပဲ သာသနာ့ ၀န်ထုပ်များ သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ပတ်ထရီးယော့ ဒုံးကျည်စနစ် ဖြန့်ကြက် ချထားရန် နေတိုး လေ့လာရေး အဖွဲ့ တူရကီ ရောက်
နေတိုး လေ့လာရေး အဖွဲ့ တစ်ခုသည် တူရကီ နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းရှိ မလက်တာ ပြည်နယ်သို့ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် နေ့တွင် ရောက်ရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့ အနေဖြင့် ပတ်ထရီးယော့ ဒုံးကျည်စနစ် ဖြန့်ကြက် ချထားရန် စီစဉ်ထားသည့် နေရာများ ကို လေ့လာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဖက်စပ် သတင်းဌာန တစ်ခု ဖြစ်သည့် ''အနာတို လီယာ'' က ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။ နိုဝင် ဘာလ ၂၇ ရက် နေ့က တူရကီ ရုပ်သံ NTV နှင့် ပြုလုပ် ခဲ့သည့် အင်တာဗျူး တစ်ခုတွင် နေတိုးအဖွဲ့ အထွေ ထွေ အတွင်းရေးမှူး အန်ဒါ ဖောက်ရက်(စ) မက်ဆမ်က ပြောကြားရာ၌ ဒုံးကျည်များ ဖြန့်ကြက် ချထားမည့် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လာမည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တူရကီသို့ ဒုံးကျည်များ ပေးပို့သွားရန် အတွက် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ များ ပါဝင်သည့် ပါလီမန်၏ ထောက်ခံ ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါ ဒုံးကျည် များကို နေတိုး အဖွဲ့ဝင် မဟာမိတ် နိုင်ငံ များက တပ်ဆင် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ကွပ်ကဲမှု ကိုလည်း မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့၏ အောက်တွင် ထားရှိသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
ရှမ်းတွေ သည်းခံနိုင်စွမ်းပျောက်နေတဲ့ ကေအိုင်အေ/ကေအိုင်အို
လူထုကို အခြေအနေချပြ ဆွေးနွေးပြီးမှ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့ရတော့ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးရ ပြန်ပြီလို့သာ ဆိုချင်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းထဲမှာ KIO ကသူတို့ ချည်းပဲ မဟုတ်ဘဲ ကချင်ပြည်သူလူထုရဲ့ အမြင်ကိုပါ ကောက်ခံသွားမယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ကချင် ပြည်သူလူထု ဆိုတာ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားမျိုးစုံ ပါဝင်တဲ့ ၂၀၁၀စာရင်းအရ အင်အား ၆ သိန်းကျော်ရှိတဲ့ လူထုရဲ့အမြင်ကိုကြည့်မှာလား အင်အား သောင်း ဂဏန်းလောက်ရှိတဲ့ KIO/KIA နဲ့ နီးစပ်ရာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အမြင်ကိုကြည့်မှာလားလို့ ပြန်မေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတွင်းသတင်းတွေအရတော့ အင်ဘန်လတို့၊ ဂမ်ရှောင်တို့လနန်တို့ ဂွမ်မော်တို့တတွေနဲ့ နီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ ဒုတ်ခသည်စခန်းက ဘုမသိဘမသိ ရွာသား တွေရဲ့ လက်မှတ်တွေကို အောက်လမ်း ကနေရယူပြီးသား။ တစ်ယောက်ထဲကို ၃ - ၄ ခါထိုးထား ရတဲ့ သူတွေပါရှိတယ်။ တစ်နည်း အားဖြင့် အင်အားကိုလက်မှတ်တုနဲ့ပွားထားတာပေါ့။ ပြီးရင် ပင်လုံညီလာခံမှာပါတဲ့ ''နောင် ၁၀ နှစ်အကြာတွင် ခွဲထွက်လိုက ခွဲထွက်နိုင်သည်" ဆိုတာကို အကြောင်းပြုပြီး ကချင်နိုင်ငံတော်သစ်(၀မ်ပေါင်နိုင်ငံ) တောင်းဆိုမယ့် အစီအစဉ်ရှိ ပြီးသား။ အဲဒါမှမရရင် KIO ကိုတရားဝင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊KIA ကို တရားဝင်ပြည်နယ်စောင့် တပ်မတော်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေး တောင်းဆိုမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း မှာရှိတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ၊ ရဲ၊စစ်တပ်စတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ မလိုအပ်လို့ ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ နိုင်ငံရေးအရ တောင်းဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သဘော ထားခြင်း ကွဲလွဲမှုတွေ အဖွဲ့တွင်းမှာ အများအပြား ရှိနေကြလို့အဖြေမထွက်ပဲ လိပ်ခဲတည်းတည်း ဖြစ်နေကြရ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အရေးကို သိပ်ပြီးလျော့မတွက်ဖို့ သမ္မတကြီးနဲ့ တကွ ပြည်သူ့ ကိုယ်စား လှယ်တွေရက်ပေါင်း များစွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပပြု လုပ်နေတဲ့လွှတ်တော်ကြီးကို တိုက်တွန်းချင် ပါတယ်။ ကချင်အရေး ဟာတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုချင်းဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပြည်ထောင် စုကခွဲထွက်လိုတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ အကြောက်တရားနဲ့ ချယ်လှယ်မှုအောက်မှာ ရောက်နေ တဲ့ပြည်သူ တွေရဲ့ ဘ၀ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးပေးဆပ်နေရတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လွှတ်တော်က ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေက ကားရဖို့ တိုက်ရဖို့ ခံစားခွင့်တွေရဖို့ လွှတ်တော် ကအဖွဲ့အစည်း သည်ပြည်ထောင်စု အဆင့်ဖြစ်သည်ဆိုတာကိုရက်ပေါင်းများစွာ ငြင်းခုံ၊ အခြေခံ ဥပဒေကို ကျော်လွန်ပြီး''အားလုံးအပေါ်မှာလွှတ်တော်ရှိသည်။ လွှတ်တော်သည် ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုသည်။ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်အမိန့်ကိုနာခံကြ"ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာအောင် ၀ိုင်းဝန်း အကြံပေး ဆွေးနွေးကြနေတုံးမှာ ကချင်ပြည်နယ်က ပြည်သူတွေကကတော့ KIA ညှင်းဆဲသမျှခံ၊ တောင်းသမျှ ပေးနေရပြီး ချွတ်ခြုံကျနေပါပြီ။ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပေးလိုက်ရတဲ့ အခွန်အတုတ်တွေ( ဗလာစာရွက်စုတ်တစ်ခုနဲ့ ရေးပြီးတောင်း ရင်တောင် မနေရဲဘူး)၊
လူသစ်ဆွဲခံ ရလွန်းလို့လည်း အရွယ်ကောင်း ယောင်္ကျားလေးသာမက မိန်းခလေးတွေလ တောင် ရွာထဲမထား ရဲတော့ဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြထောင်လိုက်တဲ့ မိုင်းတွေကြောင့် တောထဲ မသွားမလာဝံ့၊ အလုပ်မလုပ် စားဝံ့တော့သလို ကားစီး၊ ရထားစီးရင်တောင် ရင်တမမနဲ့ဖြစ်၊ စီးပွား ရေး အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ကချင် ပြည်နယ်ကြီးမှာ အစစ အရာရာရှားပါးပြီး ကလေး တွေလဲ စာမ သင်နိုင်၊ ကျောင်းမတက်နိုင် ဖြစ်နေတဲ့ ဒုတ်ခတွေကို ခံစားလာရတာ တစ်နှစ်ကျော်လာတာကို ဘာလို့ လွှတ်တော်မှာ မဆွေးနွေးကြ တာလဲ။ တပ်မတော်ကလည်း ပြတ်ပြတ်သားသားမလုပ်၊ အစိုးရကလဲ ညီကို ချင်းရန်ပွဲဆိုပြီး အလေးအနက်မထား၊ လွှတ်တော်ကြီးကလည်း အစဖော်တဲ့ လူတရားခံဖြစ်မှာ ကြောက်လို့ နည်းနည်းမှ မထ၀ံ့၊ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်းဆန်း စုကြည် ကလည်း မြန်မာပြည်မှာ လွတ်လပ်စွာ ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရတာ မကြာသေးတော့ အတွင်းကျကျ နားမလည်၊ ၈၈ ကျောင်းသား တွေကလည်း ဒေါ်လာရရုံ ဟန်ရေးပြပြီး အသံတိတ်သွားနဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တိုင်းဆင့် ဟိုဟာကိုအ၀ှာ မျှော်သလို လည်တ ဆံ့ဆံ့နဲ့၊ ပြီးတော့လည်း ဒီဝဋ်က မကျွတ်နိုင်သေးဆိုပြီး သက်ပြင်းချရတာ ကြိမ်ဖန်များလှပေါ့။ အခုလည်း အစိုးရက နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲ ကမ်းလှမ်းထားတာ သူတို့အချင်းချင်း ညှိမရတဲ့ ပြသနာကြောင့် ဖြစ်လာဖို့ ခဲ့ယဉ်းသလို ဖြစ်လာရင်တောင်မှ လက်နက်ကိုင်ထား တဲ့ခွဲထွက်လိုသူ လူနည်းစုရဲ့ အာဘော်အတိုင်း မဖြစ်နိုင် တာတွေတောင်းဆိုတော့မှာ ကို သိနေလို့ခံရခက် နေကြ ပါတယ်။ ဒီလောက်တောင် စစ်တပ်က မတိုက်ရဲရင်လဲကိုယ့် ဘားတိုက် ကိုယ်ပြန်နေကြ။ အစိုးရ ကလဲလာအုပ်ချုပ်မနေနဲ့။ KIA ကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်။ အဲဒါမှလည်း ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေက KIA/KIO အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ သူပုန်အဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်နိုင်မယ်။
ရန်ကုန်၊နေပြည်တော်စတဲ့ မြို့ကြီးတွေက နောက်မြန်မာပြည်အပြင် ဖက်နိုင်ငံတွေက ကချင်ထိုးစစ်တွေ ချက်ခြင်းရပ် ဆိုပြီးအော်နေတဲ့ သူတွေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာKIA ညှင်းဆဲတာခံ နေရတဲ့ ပြည်သူ တွေ တစ်လလောက်ပဲ နေရာချင်းလဲပြီး နေကြည့်ရအောင်။ အဲဒီတော့မှ KIA ဒုတ်ခလေး တွေ ကိုယ်ချင်းစာ နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သြဝါဒခံယူပွဲ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံး
မုံရွာမြို့ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ရှိ တင်ဝင်းထွန်း ဓမ္မာရုံတွင် ယနေ့မွန်းလွှဲပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော သြ၀ါဒခံယူပွဲတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးစန်းယု၏ လျှောက်ထားချက် (အဆိုပါသြ၀ါဒခံယူပွဲသို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မုံရွာမြို့မှ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များမှ အင်အား ၁၂၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ရာထူးအနိမ့်ဆုံး ရဲတပ်သားမှ ရာထူးအမြင့်ဆုံး ရဲမှူးကြီးအထိ ပါဝင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်းအရာများနဲ့သာသနာရေးဆိုင်ရာလျှောက်ထားချက်ဖြစ်ပါသည်ဘုရား။ တပည့်တော်က စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ရဲမှူးကြီး စန်းယုဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပန်းတောင်း တောင်စီမံကိန်းကို အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော သပိတ်စခန်းများကို ဥပဒေနှင့် အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ ဆရာတော်၊ သံဃာတော် အရှင်မြတ်များ၏ တပည့်ရဟန်း သံဃာတော်များ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ရခြင်းအပေါ် တပည့်တော်တို့ ကစိတ်နှလုံး မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာဖြစ်ရပါသဖြင့် ပဏာမအားဖြင့် ရှိခိုးတောင်းပန်လျှောက် ထားအပ် ပါသည်ဘုရား။
လက်ပန်းတောင်းတောင်စီမံကိန်းသည် ပြည်ပနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံနှင့် တရားဝင်စာချုပ်ချုပ် ဆိုပြီး ဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်းကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ရာဒေသရှိပြည်သူများ နစ်နာမှုကိုဖြစ်ပေါ်ကြောင်း သိရှိရ၍နေရာ အဆောက်အအုံ၊ ကျောင်းကန်များ တည်ဆောက်မှုများတွင် တာဝန်ရှိသူများဆောင်ရွက်ပေးသည် ဟုသိရှိရပါသည်ဘုရား။
သို့ရာတွင်အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံရေး အရောင်အသွေးများ အဘက်ဘက်မှ ၀င်ရောက်လာကြပြီး စီမံကိန်းကြီး လုံးဝရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် သံဃာတော်များ ပါဝင်လာပြီး သပိတ်စခန်းဖွင့်၍ လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းအောင် အကြပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် လာခဲ့ကြပါသည်ဘုရား။
သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သော သပိတ်စခန်းများ တွင်သံဃာတော်များ ပါဝင်လာခဲ့ကြခြင်းမှာ ဒေသခံတောင် သူများ၏ လိုအပ်ချက်တွေ ကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ ဒီဒေသ၏ သာသနိက အမွေအနစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခဲ့ကြပြီး သပိတ်စခန်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ဒေသခံပြည်သူလူ ထုများအနေဖြင့်လည်း သံဃာတော်များကို အကာအကွယ်ပြုကာ ဥပဒေများကို မျက်ကွယ်ပြုလာပြီး ပြုလုပ်လာခဲ့ ကြပါသည်ဘုရား။
၂၀၁၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်စတင်သော သပိတ်စခန်းများသည် နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းလေးခု ကိုဥပဒေမဲ့နှောင့်ယှက် ခဲ့ခြင်းကြောင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းလုပ်ေ ဆာင်တရားဝင် များရပ်ဆိုင်းခဲ့ရခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော် အတွက် ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါသည်ဘုရား။
မကြာမီက လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော လွှတ်တော်တွင် တင်ပြ ဆွေးနွေးပြီးလွတ်တော် ကလက်ခံပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီ တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အလားတ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းကိုယ်တိုင် သပိတ်စခန်းများသို့ သွားရောက်၍ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများကို တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံတော်၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ကိုရှင်းလင်းခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
သို့ပေမဲ့ မမြင်နိုင်သော ကိစ္စများတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဥပဒေအဖွဲ့က လည်းနိုင်ငံတော် ၏စီမံကိန်းတရား ၀င်ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သေးသော ကျေးရွာသုံးရွာကိုမိမိတို့ဆန္ဒအရ လောလောဆယ် မပြောင်းရွေ့လိုက မပြောင်းရွေ့ဘဲနေနိုင်ကြောင်းအသိပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အညီနိုဝင်ဘာလ(၂၇)ရက် ည(၁၁)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ သပိတ်စခန်းများမှ ဖယ်ရှားပေးရန် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။ တရားဝင်သတ်မှတ် ထားသောအချိန်ထက် (၂၇)နာရီနောက်ဆုတ်ကာ ပြောင်းရွေ့ရန်နာရီဝက်တစ်ကြိမ် ကြေညာခဲ့ပါသည်။
(၂၉)ရက်နေ့နံနက်(၃)နာရီတွင် ၁၅မိနစ်စီခြား၍ သုံးကြိမ်သုံးခါထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ တပည့်တော်တို့ အနေနဲ့တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အာဏာတည်ရေး အတွက်(၂၉.၁၁.၂၀၁၂)ရက် နံနက်(၃)နာရီတွင် တပည့်တော် တို့ကို ဥပဒေနှင့်အညီ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အသုံးပြု၍ ထိခိုက်မှုများနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်
ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက် မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရ ပါသည်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးမေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ မီးသတ်ကားဖြင့် ရေပက်ခြင်း၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးသုံးခြင်းဖြင့်သာ ဖယ်ရှားရှင်း လင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ရပါသည်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့အနေနဲ့ ဥပဒေအရ လိုက်ပါဆောင်ရွက် ခဲ့ရပါသည်။ တပည့်တော် တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တည်ငြိမ်ရေးကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ရသူများဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ဒီအရေးကိစ္စကို တာဝန်အရဆောင် ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
သို့ပါ၍ တပည့်တော်တို့ အနေဖြင့်ဆရာတော်များ ၏သားရဟန်းသံဃာများ ကိုထိခိုက်နစ်နာစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ကြပါဘုရား။
ဆရာတော်ကြီးများ ကိုယ်တိုင်သာသနာနှင့် မအပ်စပ်သည့်အလုပ်များကို မလုပ်ကိုင်ကြရန် သြ၀ါဒပေးခဲ့ကြပါသည်ဘုရား။
သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်တော်မူကြသည့် သံဃာတော်များ ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုလိုထိခိုက် နစ်နာမှုများကို အလွန်အင်မတန် စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ ဖြစ်ရပါသည်ဘုရား။
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဆရာတော် သံဃာတော်ကြီးများကိုမှဲ့ တစ်ပေါက် မစွန်းထင်းစေချင်သောဆန္ဒရှိကြပါသည်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့၏ တာဝန်ရှိမှုကို မေတ္တာတရားရှေ့ထား ၍ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန် ရှိခိုးတောင်းပန်ရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်ဆရာတော်ကြီးများဘုရား။
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရွေးချယ်ခန့်ထား သွားမည်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၈၉ တွင် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို ရပ်ရွာမှ ကြည်ညိုလေးစားပြီး သိက္ခာသမာဓိရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦးဦးအား ဥပဒေနှင့်အညီ ခန့်အပ်တာဝန်ပေး ဆောင်ရွက်စေ ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ အဆိုပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁ ဖြင့် “ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ” ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၈၆/၂၀၁၂) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဆိုပါ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား အသစ်ရွေးချယ် ခန့်ထားသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာအပ်ပါသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
၀ိနည်းတော်နဲ့ မညီသူတွေ ဖယ်ရှားပေးပါဘုရား
စက်တင်ဘာလကို ရောက်လာပြီဆိုရင်ဖြင့် ရွှေဝါရောင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ စုရုံးစုရုံးမြင်ကွင်း တွေမြင်လာရပြန်ပါပြီ။ တကယ်ဆို ၀ါတွင်းကာလကြီး မဟုတ်ပါလား။ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေး တွေလုပ်နေလို့ EU ကတောင် Sanction တွေ ရုပ်သိမ်းပြီး လက်နက်ရောင်းဝယ်မှု ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ကုန်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်တွေ ပြန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံလောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့၊ အမှတ်တရနေ့ တွေများတာ မကြားဖူးပါဘူးဗျာ။ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ အမျိုးသားနေ့၊ အာဇာနည်နေ့၊ အလုပ်သမားနေ့၊ တောင်သူလယ်သမားနေ့၊ တပ်မတော်နေ့ ဒီလို နေ့တွေပဲရှိသင့်ပါတယ်။ ဘာအထိမ်းအမှတ်၊ ညာအထိမ်းအမှတ်တွေ ရှာကြံလုပ်နေတာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာများလွန်း လှပါတယ်။ မှတ်လည်းမှတ်သား ထားနိုင်ကြပါပေ့။ ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောက် မေ့ဖွယ်တွေက ဒီမိုကရေစီခေတ်အထိ လိုက်လာနေဆဲပါလားဗျာ။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးလို့ ကင်းပွန်းတပ်ခဲ့သူကို အတော်လေးချီးကျူးပါတယ်။ ဒီနာမည်က အရမ်းကို ပေါက်သွားခဲ့တာမဟုတ်လား။ တကယ်တော့ စက်သုံးဆီဈေးမြှင့် လိုက်တာကစခဲ့တဲ့ ကိစ္စပါ။ အေးချမ်းစွာသီတင်းသုံး နေတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေ လမ်းပေါ်တက်လာအောင် မြှောက်ပင့်ပေးတဲ့ သူတွေရှိခဲ့တယ်။ တွန်းတင်တဲ့သူ တွေရှိခဲ့တယ်။ မတက်ချင် တက်ချင်အောင် ဆွဲခေါ်တဲ့သူတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ၀ိနည်းသိက္ခာ ပုဒ်တွေနဲ့မညီတဲ့ ဘုန်းကြီးအယောင်ဆောင် တစ်ချို့ကိုလဲ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
ငြင်းမရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပြောပြပါမယ်။ ၂၀၀၇ အောက်တိုဘာလ ဆန်းပိုင်းမှာ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) ဖျာပုံလမ်းက တက္ကသီလာကျောင်းတိုက်ကို သတင်းအရ ၀င်ရှာကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က ရပ်ကွက်လူကြီး၊ သက်သေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပါခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်က ဦးကောဝိဒ၊ ကျောင်းတိုက်ထဲက ဘာတွေတွေ့လဲ ဆိုတော့ ညစ်ညမ်း VCD ခွေတွေ၊ တုတ်၊ ဓား၊ လေးခွတွေ၊ ဖဲထုပ်တွေ၊ ကွန်ဒုံးတွေ၊ ပစ္စည်းအတု(ဓာတ်ပုံထဲက အဖြူရောင်နဲ့ ထောင်နေတဲ့ပစ္စည်းပါ)၊ ဟန်းဖုန်း(ဟန်းဖုန်းရဲ့ Screen ကိုလည်း သေချာကြည့်ပေးပါ) စတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုး ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို သိမ်းဆည်းမိခဲ့တယ်။ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်အတော်လေး တုန်လှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ထင်ကိုထင်မထားခဲ့ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆွမ်းကပ်ခဲ့၊ သီလယူခဲ့တဲ့ကျောင်းပါ။ အခုမှ ကြက်သီးထစွာနဲ့ နောင်တရမိပါတယ်။ ဒီလိုဘုန်းကြီးအတုတွေဟာ ဘာသာသာသနာအတွက် ကြီးမားလှတဲ့အန္တရာယ်ပါ။ ဒါက တကယ့်အမှန်တရားပါ။ အဲဒီအထဲမှာ မဟုတ်တန်းတရားတွေ အနားကပ်ပြီး လျှောက်တင်တတ်သူတွေရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် ဆရာတော်ကြီး တစ်ချို့ကတောင် တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ် အမြင်မှားပြီးပြောဆို ဝေဖန်တာတွေလဲ ကြားရပါတယ်။ အတော့်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဦးကောဝိဒက နိုင်ငံတော်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) ဖျာပုံလမ်းက တက္ကသီလာကျောင်းတိုက် ကိုပဲပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၈ ရက်နေ့က ရွှေဝါရောင် ၅ နှစ်ပြည့်ကို အဲဒီကျောင်းမှာ သူကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်ပြီး စည်စည်ကားကား လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
ဦးပဏ္ဏိဝံသ လို့ခေါ်တဲ့ ဦးပြည်ကျော် အကြောင်းကိုလည်း နည်းနည်းဖောက် သည်ချပါရစေ။ ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ကမှ အကျဉ်းထောင်က လွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်နဲ့ လွတ်လာခဲ့သူပါ။ အခုအရင်အလုပ်မျိုးတွေ ပြန်လုပ်နေပြန်ပါပြီ။ ၈၈ အရေးအခင်းမှာ လည်းပါခဲ့တယ်။ ၁၉၉၀ ကျတော့ တာမွေ၊ နန္ဒ၀န် ပါဠိတက္ကသိုလ်မှာ သပိတ်မှောက်ကံဆောင် ပြန်ပါရော။ ၂၀၀၇ မှာလည်း ထိပ်ဆုံးကပါပဲ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရွှေတောင်ကျောင်းမှာရှိစဉ်က ဘုန်းကြီးနဲ့ မဆိုင်တာတွေ အကုန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်လုံး(ဘောလုံး)၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးတွေရဲ့ ဒိုင်ချုပ်ဘုန်းဘုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ လောက်မှာ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းက ခင်ခင်ချို ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကျောင်းမှာ အတူနေရာကနေ အဲဒီမိန်းမ ကိုယ်ဝန်ရပြီး ကလေးပျက်ကျခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ၂၀၀၄ ကျတော့ ဘီးလင်းဘက်က မအိဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ကျောင်းပေါ်ကို ခေါ်လာခဲ့တယ်။ ကျောင်းမှာထားပြီး မွေးစားလိုက်တယ်(သဘောပေါက်မှာပါ)။ ကိုယ်ဝန် နှစ်ကြိမ်တိတိ ဖျက်ချခဲ့ရတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် ကာယကံရှင်တွေ သိပါလိမ့်မယ်။ သံသယရှိခဲ့ရင် ကျောင်းဝန်းကျင်မှာ နေသူတွေကို မေးသာကြည့်ကြပါ။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က ထောင်ကထွက်လာတာနဲ့ ရွှေဝါရောင် ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီး ဖွဲ့လိုက်ပါရောဗျာ။
ယနေ့သာသနာတော်မှာ ဦးကောဝိဒနဲ့ ဦးပဏ္ဏိဝံသတို့လို အတုအယောင်တွေ မရှိသင့်တော့ပါ။ အတုအယောင် လုပ်နေမဲ့အစား တကယ်နိုင်ငံချစ်ရင် လူဝတ်လဲပြီးပါတီထောင်ပါ။ လွှတ်တော်တက် စကားပြောကြပါ။ အရွေးခံရရင် သမ္မတလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး သတ္တိကောင်းရင် စစ်တပ်ထဲသာ ၀င်လိုက်ကြပါ။ တိုက်ရည်ခိုက် ရည်ကောင်းရင် ရာထူးရပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထေရ၀ါဒနိုင်ငံဆိုလို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်း ရှိတယ်လို့ ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုထား ပါတယ်။ သာသနာတော်ညှိုးနွမ်းအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့။
ဘုန်းဘုန်းတို့ဘုရား.... တပည့်တော်တို့က ဆွမ်း၊ သင်္ကန်း၊ ကျောင်း၊ ဆေး စတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါး ဆက်ကပ် လှူဒါန်းတဲ့အခါ သာသနာအကျိုးသယ်ပိုးပြီး ၀ိနည်းသိက္ခာနဲ့ ညီညွတ်လို့ ၀င်းလက်ကြည်လင် နေတဲ့ ဆရာတော်တွေရဲ့ မျက်နှာတော်တွေကိုဖူးရင်း ကြည်နူးစွာရေ စက်ချလိုပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲက ဦးကောဝိဒလို အရက်သေစာ သောက်စားပြီး ကာမဂုဏ်လိုက်စားသူရဲ့ မျက်နှာမျိုးကို တပည့်တော်တို့ ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ ချွေးနဲစာလှူဖွယ်ဝတ္ထုတွေ ဘယ်လို စိတ်ထားမျိုးနဲ့ လှူဒါန်းရမှာလဲဘုရား။ အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင် နေဖို့ ဆရာတော် ဦးဇောတိက ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေနိုင်ဖို့ သာသနာအတွက် အရှုပ်ဖြစ်နေသူတွေကိုလဲ ဖယ်ရှားရှင်းလင်း ပေးတော်မူကြ ပါဘုရား....
မိုဘိုင်းဖုန်းများ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုကို Time Based Charging စနစ်အား ဆက်လက်သုံးစွဲမည့် အစီအစဉ် ကြေညာ
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မီဒီယာများနှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုနှင့် ပြည်သူလူထု မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်ကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနှင့် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့ အတွက် ယခုကြေညာထားသည့် Volume Based Charging စနစ်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနှင့် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ သုံးစွဲနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို အသေးစိတ် ထပ်မံစိစစ်လျက် ရှိသည်။ ယင်းသို့ စိစစ်နေစဉ်အတွင်း လက်ရှိ အသုံးပြုနေသည့် Time Based Charging စနစ်ကိုသာ ဆက်လက်သုံးစွဲသွားမည် ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ် ထပ်မံစိစစ် ရရှိသည့် နှုန်းထားသစ်ကို ၁-၁-၂ဝ၁၃ ရက်မှ စ၍ အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သတင်းရရှိသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
ကြေးနီတောင် စီမံကိန်း တရုတ်သံရုံး သဘောထား ထုတ်ပြန်
အင်အားသုံး နှိမ်နင်းမှုကြောင့် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားနေသော မုံရွာကြေးနီတောင် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးက နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက် တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ အချက်သုံးချက် ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် မုံရွာကြေးနီတောင် စီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတို့၏ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်း ဖြစ်သောကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အဆိုပါ စီမံကိန်းအရ ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို လျော်ကြေးပေးခြင်း၊ နေရာပြန်လည် ချထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသော ဥပဒေများနှင့်အညီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပူးပေါင်း တာဝန်ယူကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တရားဥပဒေများကို လေးစားသောအားဖြင့် ယခုစီမံကိန်းကြီး အဆင်ပြေချောမွ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မည်ဟု ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့် မိပါကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
သံဃာတွေနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ကြံရင် (ပေးစာ - ၁၃၄)
Posted by drmyochit Monday, December 03, 2012, under ပေးစာ | No comments
အရင်တလောက ရွှေဝါရောင် ဦးဆောင်ဆရာတော် ဦးဂမ္ဘီရတပါး လူဝတ်လဲသွားကြောင်း ကြားသိ လိုက်ရ ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် အရေးအခင်းကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အရေးတချို့ ပြောင်းလဲသွားသလိုပဲ နယ်စပ်မှာ လိမ်ညာစားသောက်နေတဲ့ ဒီမိုအုပ်စုတွေလဲ ချမ်းသာ သူတွေချမ်းသားသွားကြလေရဲ့ဗျာ။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် အရေးအခင်းလဲပြီးရော အဖမ်းခံရတဲ့ သံဃာတွေရော ပျောက်သွားတဲ့ သံဃာတွေရော၊ နယ်စပ်ရောက်ပြီး ၀ရမ်းပြေးဖြစ်သွားတဲ့ သံဃာတွေရော မနည်းပါဘူး။ သံဃာတချို့ နယ်စပ်ကိုပြေးလာပြီဆိုတာနဲ့မဲဆောက်အခြေဆိုက် လုပ်စားဒီမိုအဖွဲ့ တွေက သံဃာတွေကို ကြိုတင်ပြစား အသုံးချဖို့ အဆောက်အဦ တွေတောင ငှားထားကြပါတယ်။
ပြီးတော့မှ နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဆီကရော ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးက မြန်မာပြည်သား တွေဆီကရော အလှူခံပြီး ရသမျှပိုက်ဆံတွေကို အိတ်ထဲထည့်ပြီး ညတိုင်း ဘီယာအကောင်းစား အရက်အကောင်းစားနဲ့ ပွဲတော် တည်ကြ တော့တာပါပဲ။ သံဃာတွေကတော့ ငတ်တလှည့် ပြတ်တလှည့်နဲ့နယ်စပ်မှာ ဒုက္ခရောက်လိုက်ကြတာ မပြောပါနဲ့ တော့။ အမေရိကန်စတဲ့ တတိယနိုင်ငံတွေ ရောက်ပြန်တော့လဲ နေစရာကျောင်းမရှိပြန်။ ဒီကြားတဲ့ ဒီမိုဒကာတွေနဲ့ အစေး မကပ်တဲ့ သံဃာတွေဆို ထောက်လှမ်းရေး သံဃာပါဆိုပြီး အပုတ်ချခံရပါသေးတယ်။ တချို့ လှူသူ တွေကလဲ လူလိမ်အဖွဲ့ တွေကို မလှူကြရဲပါဘူး။ အချင်းချင်းတွေ ဆိုတော့ အကြောင်းသိတယ်လေ။ ဒီကို သိတဲ့ ပြည်ပရောက် ၀ရမ်းပြေး ထိပ်ခေါင်ကြီင်္း များဖြစ်ကြတဲ့ ပီနန်ဆရာတော်၊ အင်္ဂလန်ကဦးဥတ္တရ၊ ထိုင်းနယ်စပ်က နေဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့အမေရိကန် ရောက်နေတဲ့ ဦးခေမာစာရ၊ဦးပညာနန္ဒတို့ က သံဃာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ဆိုပြီး ရသမျှအလှူခံ တော့တာပါပဲ။ အဲဒီပိုက်ဆံတွေကို ခုထိဘယ်မှာ သုံးတယ်ဆိုတာလဲ စာရင်းအပြနိုင်ပါဘူး။ ၀ိနည်းအရကြည့်ရင် အဲဒီဆရာတော်တွေ ကိုယ့်သီလ ကိုမှကိုယ်ပြန် ဆင်ဖြင်မိရဲ့လား ဆိုတာစဉ်းစား စရာပါပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ နယ်စပ်ရောက်လာပြီး သီတင်းသုံးခဲ့ဖူးတဲ့ သံဃာအချို့ ကိုမေး ကြည့်တော့ သူတို့ရတာ တပါး ဒေါ်လာတစ်ရတော့ အကူအညီရဖူးပါသတဲ့။ နောက်ပိုင်းဘာမှ မလာတော့ပါဘူးတဲ့။ သေချာစုံစမ်းကြည့်တော့ ထွက်ပြေးလာတဲ့ သံဃာတွေက ဒုက္ခမရောက်တော့ပါဘူးတဲ့။ ပြည်တွင်းမှာထောင်ကျနေတ့ သံဃာတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သံဃာတွေကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး မိုးသီးဇွန်နဲ့ ပီနန်ဆရာတော်ပေါင်းပြီး ပိုက်ဆံတွေဘုန်းပစ်တယ်လို့ သတင်းထွက် လာတော့တာ ပါပဲ။ မယုံရင်ဒီကိစ္စကို နယ်စပ်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင်နဲ့ ပက်သက်ခဲ့သူတွေ အားလုံးသိကြပါတယ်။ ခုထိလဲ အဲဒီအလှူငွေတွေကို ဘယ်မှသုံး ပစ်ကြတယ် ဆိုတာလဲ စာရင်းမပြနိုင်ပါဘူး။
အဓိကအမြတ်ထွက်သွားတာက ပီနန်ဆရာတော်ပါပဲ။ ကျောင်းကြီးတလုံး ကို မလေးမှာအဲပြီး သက်ဆောက်နိုင်လိုက်တယ်။ မီုးသီးကလဲ ထိုင်းနဲ့ အမေရိကန်ကို အခေါက်၂၀လောက်စားရိတ်ငြိမ်း သွားလာပြီး ထိုင်းမှာ ဖာလိုက်နိုင်တယ်။ ဂျပန်ကိုတောင် ထိုင်းဖာကမကောင်းလို့ဂျပန်မလေးတွေ ဆီရောက်လာပါသေး တယ်ဆိုပဲ။ ခုလဲအမေရိကန်မှာ ဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲ စားနိုင်သောက်နိုင်တာပဲ စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ့။ အင်္ဂလန်ဦးဥတ္တရလဲ ဘဲငယ်ငယ်လေးတွေကို မွေးစားနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ (ဒါက သူ့ ဝါသနာနဲ့ သူပေါ့။) ရှိစေတော့ ဒါကသူ့ တို့ လည်တို့ သူတို့ မကြောက် လို့သံဃာကိုလှူထားတဲ့ သံဃိကပစ္စည်းကို အလွသုံးစားလုပ်ရဲတာ။ သူတို့ အပြော ပြည်တွင်းကို ထောက်ပံ့ရတယ်ဆိုလို ဦးဂမ္ဘီရကို ထောက်ကထွက်ခါစမှာ အဆက်အသွယ်ရလို့ လှမ်းမေးတော့ ဘာမှထောက်ပံ့မှုမရပါဘူးတဲ့.။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဆီကမှလဲ ခုထိ အကူအညီမရဖူးပါဘူးတဲ့။ ကောင်းကြရောဗျာ။ တကယ်တော့ သံဃာတွေဟာ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အသုံးချမှုကို ကောင်းကောင်းခံလိုက်ရတာပါ။ အရမ်းဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပါ။ မြန်မာပြည် ကောင်းစားရင်တောင် (လူလိမ်တွေအပြော ဒီမိုကရေစီရရင်တောင်)သံဃာဆိုတာ ရပ်ကွက် လူကြီးတောင်ဖြစ် ခွင့်ရကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ့် ကိုယ်ကျိူးစွန်ပြီး ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိပဲ သတ္တိရှိရှိ စစ်အစိုးရကို တော်လှန်ခဲ့ကြတာ အင်မတန်ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်။
ခုတော့လဲ ဦးဆောင်ဆရာတော်ပါ လူဝတ်လဲရတော့တဲ့ အနေအထားရောက် သွားရပါ့ပေါ့။
နောက်နိုင်ငံအရေး စိတ်ဝင်စားတဲ့ သံဃာတွေအတွက်ဗဟုသုတ သင်္ခန်းစာယူ စရာပေါ့။
လုပ်မယ်ကြံရင် ဒီလို စားပါးကြီးတွေ ပြည်ပမှာ ဘုန်းကြီးရော လူတွေပါ အများကြီးရှိနေပါလား။ ဒိုကို အသုံးချဖို အသင့်စောင့်နေပါလားဆိုတာ အခုလိုခေတ်မီ တိုးတက်နေတဲ့ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ နဲနဲပါးပါး လက်လှမ်း မီသလောက် တီးခေါက်ကြည့်နိုင်ကြောင်း အသိပေးလိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် ရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရက စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအား ကျပ်ငွေ တစ်ဘီလီယံ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံး ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးကပြောကြားသည်။
ယင်း တစ်ဘီလီယံမှာ အရေးပေါ်ကာလ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လျာထားသော သဘာဝဘေး ဘက်ဂျက်ထဲမှ သုံးစွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောပြသည်။ “ဘယ်လို အသုံးပြုမယ်ဆိုတာက တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရနဲ့ လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးတို့က ဆုံးဖြတ်မှာပါ၊ ယဉ်ကျေးမှု အဆောက်အဦးနဲ့ လမ်း တံတား တွေကိုလည်း ပြင်ဆင်ဖို့ အသုံးပြု သွားမှာပါ” ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရသည် ဒေသ လိုအပ်ချက်ကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ထက် ပိုမိုနားလည် သိရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် ပညာရေး တို့အတွက် အသုံးပြုရာတွင် မည်သည့် ဒေသကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်မည်၊ မည်သို့ အသုံးပြုမည်ကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ ကသာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ပြောသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေကြီး ရွှေဘိုမြို့ မြောက်ဘက် ၄၅မိုင် အကွာကို ဗဟိုပြုကာ ရစ်ခ်ျစတာစကေး ၆ဒသမ ၈ ဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု ဇုန်နယ်မြေ (အင်းဝ) ရှိ သာသနိက စေတီအချို့ အပျက်အစီး များ ရှိခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင် အတွင်း လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင် ဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂ ဦး၊ ပျောက်ဆုံးသူ ၅ ဦး၊ ဒဏ်ရာရသူ ၂၆ ဦးနှင့် ပြိုကျ ပျက်စီးသည့် အဆောက်အဦးပေါင်း ၁၁၈ ခု ရှိပြီး ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုး ကျပ် ၂၆၉၂. ၅ သိန်းခန့် ရှိနိုင်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာ စံတော်ချိန် ၇နာရီ ၄၂ မိနစ် အချိန်တွင် ရွှေဘိုမြို့ မြောက်ဘက် ၄၅ မိုင် အကွာကို ဗဟိုပြု၍ အင်အား ၆ ဒသမ ၈ အဆင့် ရှိ မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ရာ ရွှေဘိုမြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသ များ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
မြောက်ဦးမြို့ ပန်းဈီးမြောင်းသို့ လယ်ခင်းများကိုမီးရှို့ရန် ဘင်္ဂလီများဝင်ရောက်၊ သတင်းရရှိ၍ တားဆီးနိုင်လိုက်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့မြောက်ဘက် နှစ်မိုင်ခန့်အကွာတွင် ရှိသည့် ပန်းဈီးမြောင်းသို့ ပြီးခဲ့သည့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ (၅) နာရီခန့် အချိန်တွင် ဘင်္ဂလီများ မီးရှို့ရန် ဝင်ရောက်လာ ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကုလားများမှာ ယင်းသို့ မီးတိုက်ရန် လာကြခြင်းမှာ ပန်းဈီးမြောင်း တခွင်သည် ရခိုင်လူမျိုးများ လုပ်ကိုင်စားသောက် နေကြသည့် လယ်မြေများ အများအပြားရှိပြီး ထိုလယ်ကွင်းများတွင် စပါးများ မှည့်နေပြီဖြစ် သဖြင့် စပါးခင်းများအား မီးရှို့ပစ်ရန် ဝင်ရောက်လာ ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြောက်ဦး မှ ဒေသခံတစ်ဦးက Arakan Review သို့ အတည်ပြု ပြောကြား သည်။
“ဒီမူဆလင်တွေ အခုလိုလာကြတာဟာ လယ်ကွင်းတွေကို မီးရှို့မလို့လာကြတာပါ။ အဲဒီပန်းဈီးမြောင်း တခွင်ဟာ ရခိုင်တွေ ပိုင်တဲ့ လယ်မြေတွေဆိုတော့ လာပြီး လုပ်ကြံတာပါပဲ။ လက်ထဲမှာလည်း မီးရှို့ဖို့အတွက် ဓာတ်ဆီပုလင်းတွေပါတယ်။ တုတ်ဓါးတွေနဲ့ လာကြတာ။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေသိလိုက်တဲ့အတွက် ကာကွယ်နိုင်လိုက်ပါတယ်။ စပါးတွေကလည်း မှည့်ချိန်ဆိုတော့ မီးရှို့လိုက်ရင် အဲဒီတစ်ကွင်းလုံးက စပါးတစ်စေ့မှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကြိုတင်ကာကွယ် နိုင်လိုက်တဲ့ အတွက် ကံကောင်းသွား တာပေါ့။” ဟု၎င်းဒေသခံကပြောသည်။
၄င်းအဖွဲ့တွင် မီးရှို့ရန်လာကြစဉ် မူဆလင်-ဘင်္ဂလီအယောက် (၃၀) လောက် ပါကြောင်းနှင့် ၄င်းတို့မှာ မြောက်ဦးမြို့နယ် တောင်ပိုင်းမှ မူဆလင်များဖြစ်ကြပြီး ပန်းဈီးမြောင်းသို့ တောလမ်းမှ လာကြခြင်းဖြစ် သည်ဟု သတင်းရရှိုသည်။
ရခိုင်လူမျိုးများမှာ နိုင်ငံတွင်း တရားမဝင် ဝင်ရောက် နေထိုင်သူ ဘင်္ဂလီများ၏ လာရောက်ရန်ပြုမှုကို ကြောက်ရွံ့နေကြရပြီး လယ်များတွင် ညအိပ်မနေရဲကြဘဲ အခက်အခဲနှင့် ကြုံ တွေ့နေကြကြောင်း သိရသည်။
မင်းပြားမြို့နယ် ပန်းမြောင်းကျေးရွာအုပ်စု သရက်အုပ်ကျေးရွာ အနီးရှိ ရခိုင်လူမျိုးများ စိုက်ပျိုးထားသည့် လယ်များမှ မှည်နေသော စပါးများကို နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ဘင်္ဂလီများဝင်ရောက် ရိတ်သိမ်းယူပြီး မမှည့်သေးသော စပါးခင်းများကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက် ကြကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်လူမျိုးများမှာ ဘင်္ဂလီကုလားများ၏ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဆိုးရွားလာသော အကြံစဉ်များကို ခံစားနေကြရပြီး နေရေး ထိုင်ရေးနှင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရေးများပါ အဆင်မပြေမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။
ပင်လယ်ထဲမှ ရေကူးလာသည့် ဘင်္ဂလီ ၂ ဦးကို မာန်အောင် ရဲကျွန်းတွင် ဖမ်းဆီးမိ
ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်မြို့နယ် ရဲကျွန်းတွင် ပင်လယ်ထဲမှ ရေကူးလာသော ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသား ၂ ဦးကို ယမန်နေ့ ဖမ်းဆီးမိသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ “ သူတို့ကို ပင်လယ်ထဲက ရေကူးလာပြီး လယ်တဲ တစ်ခုမှာ နားနေစဉ် ရွာသားတွေက ဖမ်းဆီးမိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ရခိုင်စကားလည်း မပြောတတ်ဘူး။ ကုလားစကား တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်က မေးကြည့်တော့ ဘင်္ဂလာနိုင်ငံ တက်ကနက်လို့ ပြောပါတယ်” ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
သူတို့အား ဖမ်းဆီးမိပြီးနောက် အထက်သို့ တိုင်ကြားရာ နေ့လည် ၂ နာရီခန့်တွင် မာန်အောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရောက်ရှိလာပြီး မာန်အောင်မြို့သို့ ခေါ်ယူသွားသည်ဟု သိရသည်။
“ ကျွန်တော်တို့က ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။ သူတို့က ဒုက္ခရောက်နေတော့ ကယ်ဆယ်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာကို အပ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကို တရား ဥပဒေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ရင်ပြီးပါပြီ” ဟု ဒေသခံကပြောသည်။ သူတို့သည် ပင်လယ်ထဲရှိ စက်လှေပေါ်မှ ကူးပြီးလာသူများဟု ပြောကြောင်း၊ တစ်ခြား လူများ ရှိသေးသလား၊ စက်လှေက ဘယ်နားမှာရှိနေသလဲ၊ ဘာကြောင်းလာသလဲဟု မေးမြန်းရာ နားမလည်ဟု ဆိုကာ တစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
မာန်အောင်မြို့နယ် ရဲကျွန်းတွင် တောင်ပိုင်းရွာနှင့် မြောက်ပိုင်းရွာဟု အိမ်ခြေ ၅၀၀ ခန့်ရှိ ရွာ (၂) ရွာရှိပြီး အဆိုပါ ဘင်္ဂလီ (၂) ဦးကို ဖမ်းဆီရမိပြီးနောက် ရွာ (၂) ရွာ၏ လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်လိုက်သည်ဟု ရွာသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ “ အခုက ရွာမှာလူတွေ ကင်းလှည့်နေကြတယ်။ ညဆိုရင်လည်း ကင်းချပြီး ရွာတွေကို စောင့်ကြပါတယ်။ အခု သတင်းကြားတာက ရေလယ်မှာ စက်လှေနဲ့ နောက်ထပ် လူတွေ ရှိတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဟုတ် မဟုတ်ကိုလည်း မသိတော့ ရွာက လူတွေလည်း သွားမကြည့်ရဲဘူး။ ဒါပေမယ့် အဖေတို့က အခု ကမ်းနားကို ထွက်သွားကြတယ်” ဟုသူမကဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဘင်္ဂလီ ၂ ဦး ရေကူးပြီး ကျွန်းပေါ်တက်လာသဖြင့် ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် လုံခြုံရေး စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု သူမက ဆိုသည်။ လွန်ခဲ့သော နိုဝင်္ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကလည်း စက်လှေပျက်၍ ကမ်းကပ်လာသူ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသား ၄၇ ကို ကျောက်ဖြူတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စက်ကို ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးပြီး အစားရေစာများ ကူညီကာ ပင်လယ်ထဲကို ပြန်လွှတ်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတနှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း တို့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၌ ချစ်ကြည်ရေးခရီး အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေသော ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာကျုံးသန်စန်း နှင့်ဇနီး မဒမ်မိုင်သီဟိုက် ဦးဆောင်သည့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ နိုင်ငံ သံရုံးသို့သွားရောက်ပြီး သံရုံး ဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ဗီယက်နမ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံသည်။ ယင်းနောက် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့သည် နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၄ဝ တွင် ကမာရွတ်မြို့နယ် သံလွင် လမ်း အမှတ်(၁၃၅ / D2 )ရှိ PVEP OVERSEAS BRANCH OFFICE သို့ရောက်ရှိရာ Petrovietnam Exploration Production အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Mr. Do Van Khanh က လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ PVEP OVERSEASမန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ Mr. Cu Minh Hoang က မြန်မာနိုင်ငံမုတ္တမကမ်းလွန် M2 လုပ်ကွက်၌ ဒုတိယသက်တမ်း ကာလ အတွင်း ရေနံ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ထို့နောက် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာကျုံး သန်စန်းနှင့် ဇနီး ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် နံနက် ၁ဝ နာရီ မိနစ် ၅ဝ တွင် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်ကြူနှင့်ဇနီး၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေနှင့်ဇနီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chu Cong Phung နှင့် ဇနီး၊ ဗီယက်နမ်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတို့က ရန်ကုန်အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ် ဆက်ကြသည်။
အမျိုးသား သစ္စာဖောက်များနှင့် စည်းကမ်းပျက် သစ္စာဖောက...
လက်ပန်းတောင်းတောင်အရေး ဆန္ဒပြသူနှစ်ဦး ထပ်မံဖမ်းဆီးခ...
စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အ...
ထန်းတပင် တူးချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှ NLD ပါတီဝင် ၁၂၀...
မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသ...
ပတ်ထရီးယော့ ဒုံးကျည်စနစ် ဖြန့်ကြက် ချထားရန် နေတိုး...
ရှမ်းတွေ သည်းခံနိုင်စွမ်းပျောက်နေတဲ့ ကေအိုင်အေ/ကေအ...
လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သြဝါဒခံယူပွဲ အော...
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမျ...
ကြေးနီတောင် စီမံကိန်း တရုတ်သံရုံး သဘောထား ထုတ်ပြန်...
ငလျင်ဒေသ ပြန်လည် ထူထောင်ရန် ကျပ်ငွေ တစ်ဘီလီယံ သံုး...
ပင်လယ်ထဲမှ ရေကူးလာသည့် ဘင်္ဂလီ ၂ ဦးကို မာန်အောင် ရဲက...
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတနှင့်ဇနီး ဦးဆောင...
မြောက်ဦးမြို့အား ခရိုင်မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်မည်
တစ်မူထူးခြားသော ရေငုပ်သင်္ဘော အီရန်ရေတပ်ပြသ
မြန်မာ့ဆေးပညာလောက၏ ဂုဏ်ယူဖွယ် အောင်မြင်မှု
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ၌ ၂ဝ၃၂ ခုနှစ် အတွင်း အလုပ်သမ...